"ဟာတူးရွာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဟာတူးရွာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၀၆:၅၀၊ ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ရက်နေ့က မူ
၄၇၄ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၈ နှစ်
၀၃:၀၀၊ ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၆:၅၀၊ ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ဟာလ်တူးတို့၏ဟာတူးတို့၏ နယ်မြေ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် နယ်မြေ ကျယ်ဝန်းသည်နှင့် ၄င်းဒေသတွင်း၏ ထွက်ရှိသည့် သစ်၊ ဝါးများသည် နောင်တွင် ဟာလ်တူးရွာလူထု၏ဟာတူးရွာလူထု၏ တိုးတက်မှုများကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုလေသည်။ ဒေသတွင်းရှိ မြစ်ချောင်းများ၊ သစ်တောများသည် ထူးကဲစွာ အကျိုးပြုသည့် သယံဇတများပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ရာ နယ်မြေများ ခွဲဝေ၍ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် အသုံးလိုလျှင်မူ ခွဲခြားမူ မရှိဘဲ အချင်းချင်း နားလည်မှုဖြင့် လိုအပ်သလို ခုတ်ယူ အသုံးပြုကြရသည်။ မိမိ ရွာနီးချင်းများနှင့် ဒေသထွက် သစ်၊ ဝါး၊ ကြိမ်၊ နွယ်များကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ သစ်တော ထူထပ်သည်နှင့်အညီ ၄င်းသစ်တောများမှ သစ်၊ ဝါး၊ ကြိမ်နွယ်များအပြင် တောရိုင်း တိရစြွာန်များလည်း ပေါများ၊ ကြွယ်ဝလှသည်။ သစ်ခွ၊ ချယ်ရီ၊ တောင်ဇလပ်ပန်းများနှင့် သစ်ခွ ပန်းပေါင်းစုံ အမျိုးပေါင်း စုံလင်လှပေရာ သဘာဝတရားများ၏ အလှဘဏ်သဖွယ် တင်စားရလောက်သည့် နယ်မြေတစ်ခုပင် ဖြစ်တော့သည်။
== ဒေသအတွင်း အုပ်ချုပ်မှုစံနစ်များ ==
ခေါင်ရည်ထိပ်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် ပြင်ဆင်မှုအနေဖြင့် ရွာတွင်းရှိ အကျယ်ဆုံး ကွင်းပြင်ကို ရွေးချယ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အဆင်ပြေလျင် ပွဲကျင်းပမည့်သူ၏ အိမ်ရှေ့ ကွင်းပြင်၌ သော်လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ကြရသည်။ ထိုပြင်ဆင်မှု အပိုင်းတွင် အဆင်အလာအရ မိဘဘိုးဘွားများ၏ ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးကြသည်များကို အသုံးပြုကြသည်များလည်း ရှိသကဲ့သို့ ပွဲလုပ်သူ၏ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ကြသည်များလည်း ရှိသည်။ ပြင်ဆင်ရသည်ဆိုရာ၌ ကွင်းပြင်များတွင် ပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များနှင့်အတုူဧည့်ပရိသတ်များနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန် ဆင်နွဲနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ခေါင်ရည် ထိပ်ပွဲများအတွက် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများမှာ နွားနောက်များကို ချည်နိုင်ရန် Phawng ဟု ခေါ်သည့် နွားနောက် ချည်တိုင်များကို ပြင်ဆင် ပြုလုပ်ထားရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ '''Y''' ပုံသဏ္ဍာန် သစ်သားတိုင်များကို ရှာဖြွေုပလုပ်၍ရှာဖြွေပြုလုပ်၍ အိမ်ရှိ ကွင်းပြင်တွင် စိုက်ကာ ပြင်ဆင်ရသည်။ ၄င်း၌ နွားနောက်များကို လေး - ငါးကောင် မှစ၍ တဆယ့်ငါးကောင်၊ အကောင် နှစ်ဆယ် စသည်ဖြင့် ချည်နှောင်၍ ပွဲများကို ကျင်းပကြရသည်။ တောထဲ တောင်ထဲမှ ပန်းများ၊ ရွက်လှ အပင်များ၊ Shai Hlip ဟုခေါ်သည့် အပင်များနှင့် အခြား ဖွယ်ဖွယ်ရာရာများဖြင့် ပွဲကျင်းပရမည့် ထိုကွင်းကို အလှဆင် ပြင်ဆင် ကြရသည်။
ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် နောက်ထပ် လိုအပ်ချက်မှာ ပွဲလုပ်မည့် အိ်မ်ရှင်၏အိမ်ရှင်၏ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်း ဖြစ် သည်။ဖြစ်သည်။ ခေါင်ထိပ်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ပွဲရှင်သည် နှစ်ရှည်လများ ပြင်ဆင်ထားရသည်။ ပွဲအတွက် ဆန်ရေ စပါးများ စုဆောင်းခြင်း၊ နွားနောက်များ စုဆောင်းရခြင်း၊ ပွဲကာလအတွင်း လိုအဓိက လိုအပ်သည့် ခေါင်ချက် ခြင်း၊ ခေါင်အိုးများ ဇကက ပြင်ဆင် ပြုလုပ်ခြင်းများ စသည်ဖြင့် ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်ကြရသည်။ နွားနောက်များ ပွဲနေ့များ၌ ရည်ရွယ်ထားသလောက် လုံလောက်မှု မရှိသေးပါက မိမိနှင့် နီးစက်ရာ ဆွေမျိုးသားခြင်းများနှင့် ပြင်ဆင် ညှိနှိုင်း ကြရသည်။ ထိုပွဲများသည် မိမိ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ချမ်းသာမှုများ ပြသည့် ပွဲလန်းများဖြစ်ရာ ကြွရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များ၏ ငြိုငြင်မှု၊ စိတ် မချမ်းသာမှုများ မဖြစ်ရလေအောင် အစစ ဟာကွက် မရှိရလေအောင် ပြင်ဆင်ကြရသည်။
ခေါင်ရည်ထိ်ပ်ပွဲများခေါင်ရည်ထိပ်ပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးရက်မှ တစ်ပတ် တိုင်အောင် ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ ပထမ ဆုံးရက်ကို ပွဲသို့ ကြွရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များအား ကြိုဆိုရသောနေ့ Zin Tun အဖြင့် သတ်မှတ်ကြပြီး အနယ်နယ်မှ ဧည့်သည့်တော်များ ထိုနေ့ရက်များတွင် အရောက် လာကြရသည်။ ဧည့်ကြိုသည့် ထိုနေ့များတွင် ကြွရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များအား ရွာအတွင်းရှိ လုံမပိုျများမှလုံမပျိုများမှ ခေါင်ရည်ခိုျများဖြင့်ခေါင်ရည်ချိုများဖြင့် ဧည့်ခံ ကြိုဆိုကြရသည်။ ခေါင်ရည်၊ ကြက်သားများဖြင့် ဧည့်ခံရင်း အပြန်အလှန် လွမ်းဆွတ်မှုကို ပြသည့်အနေဖြင့် ရိုးရာ တေးသွားများဖြင့် သီဆို နှုတ်ဆက် ကြရသည်။ ဧည့်သည်တော်မျးအားဧည့်သည်တော်များအား မိမိ တည်းခိုရမည့် အိမ်နှင့် နေရာထိုင်ခင်းများကို လိုက်လံ ပို့ဆောင် ပေးကြရသည်။ ထိုနေ့သည် အကြို်နေ့ သဘောဖြစ်သဖြင့် ကခုန်ခြင်းများနှင့် အခြား အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရသေးချေ။ မိမိ၏ ယောင်းရင်းများ၊ သွေးသောက်များ (Patai) နှင့် အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ရှေးနှောင်းဖြစ်များ၊ အတွေ့ အကြုံများနှင့် အခြား ထွေရာလေးပါးများ ပြောကြရင်းဖြင့်သာ အချိန် ကုန်လွန်စေကြသည်။
ပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြပြီးနောက် ပွဲနေ့များ၏ နောက်ဆုံးနေ့ အကြိုနေ့များတွင် Shel Shawl ဟု ခေါ်သည့် ချည်တိုင်များတွင် ချည်နှောင်ထားသည့် နွားနောက်များကို သတ်ကြရသည်။ ထိုသို့ ဆိုရာ၌ ပွဲနေ့များတွင် ဟင်းအဖြင့် ချက်စားရုံ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ နွားနောက်သားများကို ဧည့်သည်တော်များ မိမိဌာနေများသို့ အပြန် ယူသွားနိုင်ရန် သတ်ဖြတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့များတွင် ဧည့်သည်တော်များ မိမိနှင့် သင့်တော်ရာများ အတို်င်းအတိုင်း ဝေမျှပေးကြရသည်။ မိမိ၏ ယောင်းရင်းမိတ်ဆွေများကို် နွားနောက်၏ ပေါင် တခုလုံး၊ လက်ဖျံသား တခု လုံး၊ နွားနောက် ခေါင်းများ စသည်ဖြင့် ဝေမျှ ပေးကြရသည်။ တချို့ နွားနောက် တစ်ကောင်လုံး ပေးရသည်များလည်း ရှိသည်။ ထိုသို့ ဝေငှရခြင်းအတွက် ထုံးစံအရ ထိုယောင်းရင်းများမှလည်း နောင်ပွဲလမ်း ကျင်းပ ကြသောအခါများတွင် ပြန်လည် ဝေခြမ်းပေး ရသည်။ဝေခြမ်းပေးရသည်။
ပွဲ၏ နောက်ဆုံး ရက်များဖြစ်သည့် Zin Phreng ခေါ် ပွဲနောက်ဆုံးရက်များတွင်ကား ကြွရောက်လာ ကြသည့် ဧည့်သည်တော်များမှာ ပွဲနေ့များ၌ ပျော်ရွင်ခဲ့ကြသလောက် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခွဲခွာရမည် ကို တသသ ခံစား ကြရသည်။ နှုတ်ဆက်ပွဲအနေဖြင့် ပွဲစည်ကားစေရန်အလို့ငှာ ထိုပွဲလာ ဧည့်သည်တော်များထဲမှ အသက် အကြီးဆုံး သူများအား အပျော်သဘော နဘမ်းလုံး စေကြရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် ထိခိုက် နာကျင်စေခြင်း မဖြစ်စေဘဲ အပျော်သက်သက် ပြုလုပ်ကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ နောက် ၄င်းတို့ နှစ်ဦးအား ထိုက်တန်သည့် ဆုလဒ် လက်ဆောင်များကို်လက်ဆောင်များကို ချီးမြှင့် ကြရသည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ဧည့်သည်တော်များထဲမှ အသက် အကြီးဆုံးသူအား ပွဲအတွင်း၌ သတ်ဖြတ်ကြသည့် နွားနောက်များ၏ မစင်များကို ရှင်းလင်းစေကြသည်။ ဤသို ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ တဘက်သားကို အနိုင်ကျင့်ခြင်း သဘောမဟုတ်ဘဲ ရိုးရာ ထုံးတမ်းအရ ြုပလုပ်ရခြင်းထုံးတမ်းအရပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုအဘိုးကြီး ဖြစ်သူအား အိမ်ပြန်လက်ဆောင်အဖြင့် လက်ဆောင်များ မြောက်များစွာ ပေးကြရသည်။ ထိုနောက်မှ အိမ်ရှင် ရွာသားများနှင့် ဧည့်သည်တော်များ ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာဖြင့် ခွဲခွာကြရသည်။ ဤကား ခေါင်းယူထိပ်ပွဲ၏ နှစ်သက်ဖွယ် ဓလေ့ ထုံးတမ်းပင် ဖြစ်သည်။
== ကောက်သစ်စားရသည့် ရိုးရာခိုသီူး (Khotue Poi) ပွဲ ==
တောင်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ကြသည့်အခါ ဆောင်းဦးပိုင်း (ဒီဇင်ဘာ - ဇန္နဝါရီလများ) တွင် တောင် ယာများကို စတင်ခုတ်ကြရပြီး မတ်လနှင့် ဧပြီလများတွင် ၄င်းတောင်ယာများကို်၄င်းတောင်ယာများကို မီးရှို့ကြရသည်။ ထိုမတ်လနှင့် ဧပြီလများတွင်ပင် တောင်ယာ စပါးနှင့် အခြား မိုျးစေ့များကိုမျိုးစေ့များကို မျိုးချ ကြရသည်။ မေလ နှောင်းပိုင်းများတွင်မူ ၄င်းချထားသည့် မျိုးမိုျးစေ့များမှမျိုးစေ့များမှ အပင်များ အညောင့်ထွက် ကြီးထွားလာရာ တောင်ယာ ပေါင်းရှင်းခြင်းကိုလည်း စတင် ပြုလုပ်လာကြသည်။ ဇူလိုင်လများတွင် ပြောင်း၊ ဆပ်နှင့် အခြား ဟင်းသီးဟင်ရွက်များ ခူးယူ စားသောက်ရန် သင့်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သီးနှံများ ခူးယူစားသောက်ရန် အခွင့်အခါ သင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း တောင်ယာရှင်များ အနေဖြင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ခေါ်သီူးပွဲများ မကျင်းပမီ ၄င်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ခူးယူစားခူးယူ သောက်ခြင်းများစားသောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ခဲ့ကြပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကံကောင်း - ကျန်းမာခြင်း ဆုပေးသည့် တန်ခိုးရှင်ထံ၌ ဆုတောင်း အပ်နှံခြင်း မပြုရသေးသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ မိမိလုပ်ဆောင်နေသည့် တောင်ယာအတွက် ကံကောင်း၍ သီးနှံအထွက် တိုးစေရန် ကောင်းကြီး တောင်းခံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ခိုသီူးပွဲ မကျင်းပမီ အချိန်များတွင် တောင်ယာများ၌ မိမိ စိုက်ပိုျးခြင်းမဟုတ်ဘဲစိုက်ပြိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ အလိုအလျောက် ပေါက်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာ စားသုံးကြရသည်။
ခေါ်သီူးပွဲ ကျင်းပရာတွင် နှစ်ရက်ခွဲ ကျင်းပကြသည်။ ပထမနေ့များတွင် ပြင်ဆင်ရသည့် နေ့ဖြစ်ပြီး နက်ဖြန်နေ့အတွက် အစစအရာရာ ပြင်ဆင်ကြရသည်။ ဝက်၊ ကြက်၊ ဆိတ်၊ ခွေးနှင့် ခေါင်ရည်အိုးများကို ပွဲနေ့များအတွက် အသင့်ပြင်ကြရသည်။ ပွဲနေ့ ရောက်သောအခါ အိမ်ထောင်ရှင်မမှ နံနက်စောစော မိုးမလင်းမီ ပြင်ဆင်ထားသည်များကို်ပြင်ဆင်ထားသည်များကို တောင်ယာသို့ ယူဆောင်သွားရသည်။ တောင်ယာ ရောက်သောအခါ တဲငယ်လေး (နတ်စင်) ထိုးပြီး ထိုတဲငယ်၌ ယူဆောင်လာသည့် တိရစြွာန်များကိုတိရစ္ဆာန်များကို သတ်ကာ ၄င်း၏ အသွေးများကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် စပါးပင်များ ပေါ်သို့ ဖျန်းပေးရသည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း သဘောပင် ဖြစ်သည်။ သတ်ထားသည့် ယဇ်ကောင်၏ အမွှေးအမျှင်များကို်အမွှေးအမျှင်များကို မိီးရှို့၍သာမီးရှို့၍သာ သန့်စင်ရသည်။ ၄င်းယဇ်ကောင် အမွှေးများရှို့သည့် မိီးခိုးငွေ့များမီးခိုးငွေ့များ ရမှသာ နတ်မင်းများမှ ကောင်းကြီးပေးသည် ဟူ၏။ တောင်ယာ အထွက် တိုးနိုင်ရန်အတွက် ဆုမွန် ကောင်းများ တောင်းသည်။ ထို့နောက်မှ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များကို်ဟင်းရွက်များကို ခူးယူရသည်။ ဆောင်ရွွက်ဆောင်ရွက် ဖွယ်ရာများ ဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် သတ်ထားသည့် တိရစြွာန်၏တိရစ္ဆာန်၏ အသားများကို်အသားများကို ပိန်းဥရွက်ဖြင့် ထုပ်လျက် စပါးရွက် အနည်းငယ် ဆွတ်ကာ အိမ်သို့ ယူဆောင်သွားရသည်။
အိမ်၌ ကျန်ရစ်ခဲ့သော အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားကြီးမှလည်း နံနက်စောစော ထပြီး ခေါင်ရည်အိုးများနှင့် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်ဖွယ် များကို်များကို ပြင်ဆင် ထားရသည်။ နောက် မောင်းငယ်လေးများ၊ ဗုံနှင့် အခြား တူရိယာ များတီးမှုတ်ကာ ကခုန်နှင့်၏။ တောင်ယာမှ ရောက်ရှိလာသည့် အိမ်ထောင်ရှင်မမှလည်း မိမိ ယူဆောင်လာသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အသား - ငါးများကို်ငါးများကို ချက်ပြုတ်ထားရသည်။ ထမင်းဟင်းများ ကျက်ပြီးသည်နှင့် ချင်း (ဂျင်း) ထောင်းများဖြင့် နယ်ကာ အချင်းချင်း ထမင်း ခွံ့ကြွေ (Buhbai) ခြင်းများဖြင့် ပျော်ရွှင်ကြရသည်။ ထမင်း - ဟင်းများကို အိမ်နီးချင်းများ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပို့ကြရသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဟင်းအမယ်စုံ စားရသည့် ပွဲဖြစ်၍ ပျော်ရွွှှင်ဖွယ်ပျော်ရွွှင်ဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ထိုပွဲနေ့တွင် အိမ်တိုင်းလိုလို ခေါင်ထိပ်ကြသဖြင့် တအိမ်တက်ဆင်း မိဿဟာယ ပြုသည့်အနေဖြင့် လိုက်သောက်ရသည်။ ကာလသားများ၏ အားစမ်းခြင်းများ သော်လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာတွင်းရှိ လုံမပိုျများနှင့်အတူလုံမပျိုများနှင့်အတူ ကခုန် - ကဗျာရွက်ဆို ကြခြင်းများစသည်ဖြင့် ထိုပွဲကို ကျင်းပကြသည်။
ရှေးယခင်က တိုင်းတပါးသားများ ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ အစိုးရ အာဏာစက် သက်ရောက်ခြင်းများ မရှိခဲ့သော်လည်း နှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းလှသည့် ယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ထုံးတမ်းများသည် လူထု၏ ကိုယ်ကျင့် တရားများကို ကောင်းစွာ ထိန်းကျောင်း ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့် အစဉ်အလာဖြင့် နေထိုင် ကျင့်ကြံခဲ့သည့် လေးစားဖွယ် ဓလေ့များကို်ဓလေ့များကို ခေတ်လူငယ်များ အနေဖြင့် ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းသင့်ပေသည်။
== ကောက်သိမ်းပွဲ (Cangzawm-Hlaithar Poi) ==
နှစ်ဟောင်းတွင် တောင်ယာ လုပ်ငန်းများကို် ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး လုပ်ငန်းပြိီးဆုံးသည့်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည့် တောင်ယာစပါးများ ရိတ်သိမ်းပြီးသောအခါ ထိုတောင်ယာမှ ထွက်သည့် စပါးများကို စုပေါင်း စားသုံးနိုင်ရန် ကျင်းပရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားများ အားလုံး တောထဲသို့ ထွက်ကြကာ အမဲလိုက်ကြရသည်။ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်နှင့် လိုအပ်လျင် သုံး - လေးရက် စသည်ဖြင့် အမဲလိုက်ကြရသည်။ ထို အချိန်များတွင် ရွာ၌ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည့် အမျိုးသမီးထုနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများမှလည်း လိုအပ်မည့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များကို ရှာဖွေထားကြရသည်။ှ ရှာဖွေထားကြရသည်။
တောထဲသို့် အမဲလိုက်ထွက်သူများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရှာသူများ လိုအပ်သလောက် စုမိကြသောအခါ ကောက်သိမ်းပွဲကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုပွဲနေ့များတွင် မိမိတောင်ယာမှ ထွက်ရှိသည့် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာများကို အိမ်ထောင်ရှင်များမှ ကိုယ်စီ ချက်ပြုတ်ခဲ့ကြပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာသို့ ယူဆောင်လာ ကြရသည်။ အမျိုးသားများ ထုမှလည်း အမဲလိုက်ရာမှ ရရှိလာကြသည့် သားကောင်များကို ချက်ပြုတ်ထားကြပြီး ရွာလုူထုရွာလူထု စုရုံး လာကြသောအခါ ဝေမျှ ပေးကြရပြီး ပျော်ရွှင်စွာ စားသုံးကြရသည်။ ထိုနေ့မျိုးတွင် ထမင်းဟင်းများကို်ထမင်းဟင်းများကို မိမိ နေအိမ်များ၌ မစားကြရပေ။ ချက်ပြုတ်ထားသမျှကို ပွဲစုရပ်နေရသို့ အားလုံး ယူဆောင်လာကြပြီး စားသုံးကြရသဖြင့် ကျေးလက်ဓလေ့၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည့် နေ့ထူးနေ့ရက် တနေ့ပင်ဖြစ်သည်။
တောင်ယာ လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းရသည့် တောင်ပေါ်သားများအဖို့ ထိုပွဲနေ့သည် နှစ်ဟောင်း (တောင်ယာဟောင်း) ကို နှုတ်ဆက်၍ နှစ်သစ်(တောင်ယာမြေသစ်) အတွက် ပြင်ဆင်ရသည့် နှစ်သစ်ကူးပွဲ သဘောပင်ဖြစ်သည်။ ကောက်သိမ်းပွဲများ ကျင်းပပြီးသည်နှင့် ရွာသူရွာသားများအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ် ထူးထူးထွေထွေ မရှိသဖြင့် အလုပ်ပါးချိန်၊ အနားယူရသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာလုူကြီးများ၊ရပ်ရွာလူကြီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများမှ နေ၍ ထိုကာလများတွင် နောင်နှစ် လုပ်ဆောင်ရမည့် တောင်ယာမြေများအတွက် ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း စသည်များကို နမိတ် ဗေဒင်များ၊ ကြက်ဥဗေဒင်များ၊ သစ်ကိုင်းတစ်မျိုးကိသစ်ကိုင်းတစ်မျိုးကို ုယူ၍ယူ၍ လှီးပြီး ကြည့်ရသည့် ရိုးရာဗေဒင် စသည်များဖြင့် နမိတ်များ ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ အကယ်၍ နောင်နှစ်အတွက် နမိတ် မကောင်းဟု ယူဆရလျင် တောစောင့်နတ်၊ တောင်စောင့်နတ်များအား ယဇ်ပူဇော်ပသခြင်း၊ ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်၍ ပူဇော်ပသခြင်းများ စသည်ဖြင့် လိုအပ်သည်များကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။
== ရွာလုံးကျွတ် ပါဝင်ရသည့် ရိုးရာ ငါးဖမ်း (Rasak Poi) ပွဲ ==
တောင်ပေါ်ရိုးရာ ပွဲများတွင် Rasak ပွဲသည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤပွဲများကို နှစ်စဉ် နွေဦးကာလများတွင် ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ အဓိကအားဖြင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းများ အလုပ်ပါးချိန်များတွင် ကျင်းပရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကာလများသည် ရသီဥတု ပူလာသည်က တစ်ကြောင်း၊ အလုပ်များ ပါးနေသည်က တစ်ကြောင်း ကျေးရွာ နေလူထုများအနေဖြင့် ပိုမို၍ အချင်းချင်းခအချင်းချင်း ျစ်ခင်မှုရှိစေရန်ချစ်ခင်မှုရှိစေရန် အထုူးအထူး ပျော်ပွဲသဘောဖြင့် ကျင်းပ ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ရွာလုူထုရွာလူထု တရပ်လုံး ပါဝင်ကြရသဖြင့် အထုူးအထူး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည့် ပျော်ပွဲတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
ပွဲ ကျင်းပရာတွင် ရွာအနီးရှိ ကီလောင်းချောင်းတွင် ချောင်းရေ စီးကြောင်း ပိတ်၍ ငါးဖမ်းရသည့် ငါးဖမ်းပွဲကို ဆိုလိုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျင်းပသည့် ပုံစံအား ဖေါ်ပြရလျှင် ချောင်းရေ စီးကြောင်းများသည် မိုးတွင်းကာလများတွင် ရေစီးကြောင်းများ ဖြာ၍ စီးဆင်းကြသည်။ ထို ရေစီးကြောင်းများသည် မြစ်ကြောင်းများစွာ ဖြာထွက်လျက်ရှိရာ ထိုရေစိီ်းကြောင်းများသည်ထိုရေ စီးကြောင်းများသည် နွေကာလများတွင် တခိုျ့မြစ်ချောင်းများတချို့မြစ်ချောင်းများ ခန်းခြောက်ခမ်းခြောက် တတ်ကြသည်။ ထို ခမ်းခြောက်သည့် မြစ်ကြောင်း အဟောင်းတွင်းသို့ စိီ်ဆင်းနေသည့် စီးဆင်းနေသည့် ချောင်းရေများကို လွှဲပြောင်းပေးရသည်။ ထိုအခါ တစ်ဘက်ရှိ ချောင်းရေမျာ ခမ်းခြောက်သွားပြီး ထိုခမ်းခြောက်သည့် ရေစီးကြောင်းထဲမှ ငါးများကို်ငါးများကို ဆယ်ယူ ဖမ်းဆီးကြရသည်။ တချို့ အိုင်ထွန်းသည့် နေရာများတွင်ကား ငါးများ အလွယ်တကုူအလွယ်တကူ ဖမ်းယူ၍ မရရာ တောထဲ၌ အလိုအလျောက ်ပေါက်သည့်အလိုအလျောက်ပေါက်သည့် နွယ်ပင်ကြီးတစ်မျိုး (Ruu) ကို ခုတ်ယူ၍ ရေအိုင်ထဲသို့် အ မြုပ်များအမြုပ်များ ထွက်သည် အထိ ထုထောင်း ကြရသည်။ အမြုပ်များ ထွက်သည်နှင့် ရေထဲရှိ ငါးများ မူးမော်လာကာ ထိုအခါမှသာ အလွယ်တကူ ဖမ်းယူ၍ ရသည်။
ငါးများဖမ်းဆီးကြရာတွင် ဝါးများဖြင့် မြုန်းများ (Uung)၊ ငါးဖမ်းရန်အတွက် ဂုန်လျှော်ဖြင့် ယက်လုပ်သည့် (sheuh)၊ ပိုက်ကွန် စသည်များကို အသုံးပြုကာ ငါးများကို ဖမ်းကြရသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အန္တရာယ် ကင်းအောင် ဖမ်းကြရသဖြင့် မလိုအပ်သည့် ငါးကလေးများ၊ မဖမ်းမိသည့် ငါးများ ပျက်ဆီးသွားခြင်း မဖြစ်ဘဲ Ruu အမူးပြေသောအခါ ပြန်လည် ရှင်သန်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရေသတ္တဝါများအတွက် ထိခိုက်မှု မဖြစ်လှပေ။ (နောင်များတွင်မူကား ထုံးရေများဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိုင်းခွဲခြင်းများဖြင့် လည်းကောင်း ငါးများ ဖမ်းဆီးလာကြရာ ငါးများနှင့် ရေသတ္တဝါများအတွက် ထိခိုက်မှုများ ရှိလာသည်။) လူထု တရပ်လုံး၏ ဖမ်းမိသမျှ ငါးများကို တနေရာတည်းတွင် စုပုံထားကြကာ ရွာအတွင်း အသက်ကြီးသုူမှအသက်ကြီးသူမှ လေလွန့်မှု မရှိအောင် စောင့်ရှောက်ထားရသည်။ ငါးများ ဖမ်းဆီးကြပြီးနောက် ရရှိသမျှ ငါးများကို ကျေးရွာ လူကြီးမှ ဖြစ်စေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများမှ ဖြစ်စေ လူထုအား အညီအမျှ ခွဲဝေပေးရသည်။ ထိုနောက် တနေ့တာ၏ ငါးဖမ်ခြင်းအလုပ် အပြီးသတ် ကြရသည်။ ဤပွဲသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ ကာလသားများ နှင့် လုံမပိုျများတို့၏လုံမပျို များတို့၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့များဖြစ်သလို မိမိ၏ အစွမ်းအစများ ထုတ်ဖေါ်ရသည့် ပွဲလည်း ဖြစ်သည်။
ငါးဖမ်းပွဲပြီး၍ ညနေပိုင်းတွင် ရေမိုးခိုျးကြပြီးရေမိုးချိုး အပိုျကြပြီး လူပိုျလှည့်ခြင်းများအပျို လူပျို လှည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ နေ့ခင်း၌ ပင်ပန်းထားသည်များကို ညပိုင်းတွင် ရွာတွင်းရှိ လုံမပိုျများမှလုံမပျို များမှ နှိပ်နယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးကြသည်။ လူပိုျလှည့်သည်ဟုလူပျို လှည့်သည်ဟု ဆိုရာ၌ ရိုင်းစိုင်းသည့် သဘောများနှင့် မဟုတ်ဘဲ ရင်းနှီးခင်မင်မှု အနေဖြင့်သာ ဆက်ဆံကြရသည်။ ခေါင်ရည်ထိပ်ခြင်း၊ မီးပုံဖိုကြပြီး ဝိုင်းဖွဲ့ကြခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိုညကို ကုန်လွန်စေကြသည်။ ဤကား တောင်ပေါ်ဒေသ၏ နှစ်သက်ဖွယ် အလှတစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဒိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲလန်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
=== ရိုးရာခေါင်ရည် ===
ခေါင်ရည်များကို ပြုလုပ်ရာတွင် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မတူညီကြပေ။ ကချင် ခေါင်ရည်နှင့် ရှမ်း ခေါင်ရည်များကို ဆန်၊ ထမင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ကြပြီး လှော်စာ ဆန်ဆန်ဖြစ်သည်။ ချင်းတောင်ဒေသ၌ ခေါင်ရည် ပြုလုပ်ကြပုံမှာ တခြားသော ပုံစံမျိုးနှင့် မတူဘဲ တမူထူးခြားသည်။ ချင်းတောင် ခေါင်ရည်ကို ဆပ်နီများနှင့် ပြောင်းဖူးများဖြင့် ချက်၍ ပြုလုပ် ကြသည်။ ပြုလုပ်ပုံမှာ ဆပ်နီ သို့မဟုတ် ပြောင်းများကို်ပြောင်းများကို ချက်၍ နှပ်ထားရသည်။ ထိုနှပ်ထားသော ဆပ်နီများကို အအေး ခံထားရပြီး အေးသောအခါ တဆေးများ (Tawl) ကို လိုအပ်သလို ရေမွှေပေးရသည်။ သမအောင် မွှေပြိီးမွှေပြီး ပြင်ဆင်ထားသည့် ခေါင်အိုးများတွင် သိပ်ထားရသည်။ ခေါင်အိုးဟု ဆိုရာ၌ မြေအိုး တစ်မိုျးဖြစ်ပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခေါင်ရေများ ထည့်ရန် သီးသန့်စီရင် ပြုလုပ်ရသည့် မြေအိုး တမိုျးဖြစ်သည်။တမျိုးဖြစ်သည်။
ရိုးရာ ခေါင်ရည်များသည် ဆေးဝါးများအဖြင့်သာ သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ သို့သော် တခါတရံ အလွန်အကျွံ သောက်သုံးမိပါက မူးတတ်သဖြင့် ခေါင်ရည်ကို သေရည်အသွင် သောက်သုံးကြသည်များလည်း ရှိသည်။ ရှေးဘိုးဘေးတို့သည် တောင်ယာအလုပ်ကိုသာ နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်ကြရာ ပင်ပန်းကြရသည်။ ထိုအခါ မိမိအတွက် သိီးသန့်သီးသန့် စီမြုံပလုပ်ထားသည့်စီမံပြုလုပ်ထားသည့် ခေါင်ရည်များကို ထိပ်ကြရင်း ညနေခင်းများ၌ အမောဖြေသည့်အနေဖြင့် သောက်သုံးကြသည်။ ထိုအခါ အားအင်များ ပြန်လည် ပြည့်ြုဖိးလာပြီးပြည့်ဖြိုးလာပြီး နောက်နေ့အတွက် အင်သစ် အားသစ်ဖြင့် တောင်ယာအလုပ်ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန် သင့်လျော် ကောင်းမွန်ပြီး အားဖြည့်သည့် အဟာရ တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ ရှေးဘိုးဘေးများ၏ အသက်ရှည် ကျန်းမာခြင်း အကြောင်းရင်းများတွင် ထိုခေါင်ရည် သောက်သုံးခြင်းသည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
လေလုံပိတ်၍ သိပ်ထားသည့် ခေါင်အိုးကို ထိပ်ရာတွင် အလုံ ပိတ်ထားသည့် ခေါင်အိုးအဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ရေ နွေး၊ရေနွေး၊ သို့မဟုတ် ရေသတ်များဖြင့် စိမ်ထားရသည်။ ထိုသို့ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီခန့် စိမ်ပြီးနောက် ပလူတံခေါ်သည့် (Paitawp) ဝါးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စုပ်တံဖြင့် စုပ်ယူ၍ သောက်သုံးရသည်။ သို့တည်းမဟုတ် အရည်ငင်၍ သောက်သုံးလိုလျင် ထိုပလုူတံမှထိုပလူတံမှ နေ၍ ဗူးသီးခြောက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကရိယာ (Cuemm) ဖြင့် ယူငင်ကာ ခေါင်ရည်သောက်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် ဝါးကျည်တောက် (Rawtleng) ဖြင့် ထည့်၍ ပျော်ရွှင်စွာ သောက်သုံး ကြရသည်။
နောင်အခါများတွင် ထိုခေါင်ရည်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြင့် လွဲမှား၍ သောက်သုံးလာကြရာ မကောင်းမှု အသွန်အသွင် မြင်လာကြသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာတရားများ ပြန့်ပွားလာသောအခါ ခေါင်ရည်များကို မကောင်းဆိုး ဝါးပမာမကောင်းဆိုးဝါးပမာ တော်လှန်လာကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ခေါင်ရည်သည် ယခုအခါတွင် အယူဝါဒသစ်များကြောင့် ယနေ့ မျက်မှောက် ကာလများတွင် ဆိတ်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်လုနီးပင် ဖြစ်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အသွန်ဖြင့်အသွင်ဖြင့် ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းရန် သင့်လှပေသည်။
= ဟာတူး (Haltu) ကျေးရွာ၏ ကံကြမ္မာနှင့် ရွာတည်နေရာများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း =
== လောင်ဟွေးမှ ဟာတူး ==
[[ဟာတူးရွာ]]၏ စတင်ဖြစ်တည်လာမှုကို်စတင်ဖြစ်တည်လာမှုကို ရှေ့အခန်းများ၌ ခေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ စတင်တည်ခဲ့သည့် ရွာတည်နေရာမှ [[ဟာတုူးရွာ]]အထိ ပြောင်းလဲမှုများ၊ ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းများ မြောက်များစွာဖြင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရသည်။ သွီစား - လောင်ဟွေးဒေသ၌ နေထိုင်စဉ်၌ပင် နယ်ခြားများ၏ စစ်ပြုခြင်း ဘေးရန်များ၊ တောရိုင်း တိရစြွာန်များ၏တိရစ္ဆာန်များ၏ ရန်များဖြင့် မျိုးစုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။
[[ဟာလ်တူးရွာ]]၏ ဖခင်ကြီး Pacum သည် ယံပါးပေါလ်ကို စပါးအမှတ်ဖြင့် လိုက်သွားရင်း လောင်ဟွေး ဒေသ၌ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် နှစ်ပေါင်းကြာလာသောအခါ လူဦးရေ ထူထပ်များပြားလာပြီး စည်ကားပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အီမ်သဲန်း (Immteng) တောင်ကြော၌ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက် ကာလအတန် ကြာသောအခါ [[သဘာဝဘေးများ]]နှင့် တခြားနယ်ခြားများ၏ နှောက်ယှက်မှုများများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ သော ဘေးအန္တရာယ်များ ထပ်မံ၍ မရင်ဆို်င်လိုသဖြင့်မရင်ဆိုင်လိုသဖြင့် ဘေးကင်းရာသို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းရွှေ့ကြရသည်။ ရွာ၏ တည်နေရများ တနေရာမှ တနေရသို့တနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြရင်း နောင်တွင် ယခုလက်ရှိ နေထိုင်ကြသည့် [[ဟာတူးရွာ]] တည်နေရာတွင် ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြရသည်။
လောင်ဟွေးဒေသ၌ နေထိုင်ခဲ့ကြစဉ်တွင် တောရိုင်း တိရစြွာန်ဖြစ်သည့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည့် ခြင်္သေ့ (Samthuen) ရန်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရ သကဲ့သို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသကဲ့သို့ စဲမ် (Cem) တို့၏ စစ်ပြုခြင်းဒါဏ်ကို်လည်းစစ်ပြုခြင်းဒါဏ်ကိုလည်း အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ စစ်ဘေးကို်စစ်ဘေးကို အကြိမ်ကြိမ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသော်လည်း အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြသည်များ ရှိသကဲ့သို့ ခံရသည်များလည်း ရှိသည်။ စဲမ် (Cem) ရန်များ ဟုဆိုရာ၌ ဘိုးဘေးတို့၏ [[နှုတ်သမိုင်းများ]]အရ ယခု [[ဇိုးတုန်နယ်များ]]ရှိ Senthang မျိုးနွယ်စု ဟုူ၍လည်ကောင်း၊ဟူ၍လည်ကောင်း၊ [[ဟားခါးမြို့နယ်]]ရှိ Surkhua-Zokhua ဒေသများရှိ [[မျိုးနွယ်စုများ]]ဟူ၍ လည်းကောင်း ဖေါ်ပြလေ့ ရှိကြသည်။
လောင်းဟွေးဒေသတွင် Cem များ၏ စစ်ပြုခြင်းကို ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ စစ်ဘေး ရင်ဆိုင်ရဖန် များလာသောအခါ ရွာလူထုများ၏ ငြိမ်းချမ်းမှုကို်ငြိမ်းချမ်းမှုကို နောင့်ယှက်လွန်းသဖြင့် လုူထုလူထု ဆန္ဒအရ လောင်ဟွေးဒေသမှ နေ၍ နောင်ပါန်အီမ် (Nawng Pang Im)၊ ဟောန်သာန်အီမ်း (Hontang Imm) ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လာခဲ့ ကြရသည်။
နောင်ပါန်း - ဟောန်သာန် ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ကြရသောအခါ၌လည်း Cem ၏ စစ်ဘေး ဒါဏ်များမှ လွတ်မြောက် ကင်းရှင်းခြင်းမရှိဘဲ ကြုံတွေကြုံတွေ့မြဲ ့မြဲ ကြုံတွေ ့ကြုံတွေ့ ကြရသည်။ လောင်ဟွေးဒေသ၌ စစ်မက်ဘေး ငါးကြိမ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသကဲ့သို့ နောင်ပန် - ဟောန်သာန်ဒေသတွင်လည်း စစ်ဘေးဒါဏ်ကို်စစ်ဘေးဒါဏ်ကို လေးကြိမ်မျှ ရင်ဆို်င်ခဲ့ကြရသည်။ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ နောင်ပန်ဒေသ၌ နေထိုင်ခဲ့ကြစဉ်တွင် ရန်သူများ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခံတပ်များအသွင် စူးပင်များ (Thangrawh Shing) ကို တန်း၍ စိုက်ကြသည်။ ထိုအပင်တန်းများ ယနေ့တို်င်ပင်ယနေ့တိုင်ပင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားကြပါသော်လည်း စစ်ဘေးတွင်မူ အခိုက်အတန့်မျှသာ တားဆီးနိုင်ပြီး အပြည့်အဝမူ ဟန့်တားနိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ပေ။ ဤသို့တဖန် စစ်ဘေးကို်စစ်ဘေးကို ရင်ဆိုင်ကြရ မြဲဖြစ်ရကား နောင်ပါန်းဒေသမှ ရှယ်လ်အီမ်း - ပုခ်ဗန်ဒေသသို့ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ ့ကြရသည်။ပြောင်းရွှေ့ကြရသည်။
နောင်ပါန်ဒေသမှ စစ်ဘေးကြောင့် ရှယ်လ်အီမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီး ထိုဒေသ၌ ကာလအတန်ကြာ နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ စစ်ဘေးနှင့် ကင်းရှင်းလိုသဖြင့် ရှယ်လ်အီမ်း (Sel Imm) ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသော်လည်း ၄င်းဒေသ၌ပင်လျင် စစ်ဘေးကို်စစ်ဘေးကို ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ တနေ့သော် ရန်သုူများသည်ရန်သူများသည် စစ်တိုက်၍ အပြန်၌ နောင်ပါန်အရပ်မှနောင်ပါန်အရပ်မှနေ၍ ပုဆိုး၊ သင်တိုင်း လှန်ပြ၍ ပြောင်လှောင်ကြရာ ရှယ်လ်အီမ်း - ပုခ်ဗန် (Puk Van) အရပ်မှနေ၍ တစ်ယောက် သောသူကတစ်ယောက်သောသူက လေးဖြင့် လှမ်းပစ်လိုက်သဖြင့် ထိုလှောင်ပြောင်သုူ၏ထိုလှောင်ပြောင်သူ၏ တင်ပါးကို မှန်အောင် ပစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမှ ရန်သူများ လန့်ဖြန့်ကြကာ နောက်ကြောင်းလှန် ပြန်လည် ဆုတ်ခွာကြရတော့သည်။ လောင်ဟွေးနှင့်အနီး ဝန်းကျင်များ၌ ရန်သူ့စစ်ဘေး ရှောင်တိန်းရင်း အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန် နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသော်လည်း စစ်ဘေး မလုံခြုံသဖြင့် ယခုလက်ရှိ [[ဟာတူးရွာ]]၏ အထက်နားရှိ လင်အီမ်း - ထေတလန် - ရှင်ဟိုင်း (Ling Imm - Thei Tlang - Shing Hai) ဒေသို့ တဖန် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြရသည်။
ဤဒေသတွင်မူ ယခင်ကာလများကဲ့သို့ စစ်ဘေးဒဏ်ကို်စစ်ဘေးဒဏ်ကို မခံကြရတော့ပေ။ အတန်သင့် ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီး စစ်ဘေးကင်းသည်ဟု ဆိုသော်လည်း လုံးဝ ကင်းရှင်းသွားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲဲမဟုတ်ဘဲ Cem ၏ စစ်ဘေး နောင့်ယှက်မှုကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ငြိမ်းချမ်းသယောင် ရှိသော်လည်း ထိုသို့ စစ်ဘေးကို တဖန် ရင်ဆိုင်လာရသောအခါ နယ်မြေသစ်ဖြစ်ခြင်း၊ အစစ အဆင်ပြေမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် တစ်ဘက်ကမ်းရှိ ရင်ငက် - မာလ်ဆောမ် (Ringget - Malsawm) ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် လာကြသည်။
တဖန် ထို Ringget - Malsawm ဒေသ၌လည်း စစ်ဘေးကို်စစ်ဘေးကို သုံးကြိမ်ခန့် ပြန်လည် ရင်ဆိုင်ကြရသဖြင့် အလျင်နေထိုင်ရာ နေရာဟောင်းဖြစ်သည့် ရှယ်လ်အီမ်း - ပုခ်ဗန် ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ကြရသည်။ အစစ အဆင်ပြေသည့် ရှယ်လ်အီမ်း (Shel Imm) ဒေသသို့ တချို့သာ ပြောင်းရွှေ့ကြသော်လည်း တချို့မှာ ထိုလက်ရှိနေရာ၌သာ ကျန်ရစ် နေထိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် နောင်တွင် အထက် [[ဟာတူးရွာ]]နှင့် အောက် [[ဟာတူးရွာ]] ဟူ၍ [[ဟာတူးရွာ]] နှစ်ရွာဖြစ်လာသည်။
ထိုသို့ ဟာတူးနှစ်ရွာ ခွဲ၍ နေထိုင်လာကြသောအခါ တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ ကူးလူး ဆက်ဆံ ဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲခြင်း၊ လူထု လှုပ်ရှားမှုများ၌ စည်းလုံးမှု အားနဲခြင်းနှင့် အခြား အားနဲချက်များကြောင့် နောင်တွင် အောက်ဟာတူးရွာ အနီးရှိ လင်ကော်လ် - ဒါဝ်ကော်လ် (Lingkawl - Daukawl) ဒေသများသို့ ပူးပေါင်း နေထိုင်လာကြသည်။ ထိုသို့ စုပေါင်း နေထိုင်လာကြသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် များစွာ လွယ်ကုူလာပြီးလွယ်ကူလာပြီး နောင်တွင် ဝန်ကျင်ဒေသများကြား၌ စံပြကျေးရွာအဖြင့် ရပ်တည်လာနိုင်သည်အထိ အောင်မြင်မှုများ ရရှိလာနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကား [[ဟာတူးရွာ]] စတင်လာရာမှ ယနေ့ လက်ရှိ အခြေအနေအထိ ပြောင်းလဲနေထိုင်ခဲ့ကြသည့် နေထိုင်မှု အဆင့်ဆင့်ပင် ဖြစ်သည်။
== Samthuen Lung နှင့် ခြင်္သေ့ရန် ==
ဟာလ်တူးရွာသားများ နှင့် ဒိုင်လူမျိုးတို့တွင် ဒဏ္ဏာရီဆန်သည့် အဖြစ်အပျက်များ ရှိခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ် ပျက်များတွင် ဟာလ်တူးတို့၏ ခြင်္သေ့ရန် (Samthuen) တော်လှန်ခြင်းမှာ အထုူးထင်ရှားသည်။အထူးထင်ရှားသည်။ လောင်ဟွေးဒေသ၌ နေထိုင်ကြသည့် ဟာလ်တူး လူမျိုးများသည် အန္တရာယ် ရန်စွယ်ကင်းစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ထိုသို့ နေထိုင်ခဲ့ကြရာ တနေ့သောအခါ မထင်မှတ်ဘဲ ရွာတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ တစ်ယောက်ပြီး တစယောက် ပျောက်ဆုံးနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကလေးသူငယ်များ ပျောက်ဖန်များလာရာ ထိုအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေလာကြသည်။ နောက်မှ ခြင်္သေ့၏ ရန်ကြောင့် ကလေးများ နေ့စဉ် ပျောက်ဆုံးနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိကြရသည်။
ကျေးရွာ လုံြုခံရေးတွက်လုံခြုံရေးအတွက် အန္တရာယ် ကြီးမားလှသော ထိုခြင်္သေ့ ရန်စွယ်ကို မည်သို့မည်ပုံ ဖြေရှင်းရမည်ကို နည်းလမ်းများ ရှာကြံလာကြသည်။ တခြား နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းရန်မှာ မလွယ်ကုူလှသောကြောင့်မလွယ်ကူလှသောကြောင့် ခြင်္သေ့ကြီး အန္တရာယ်အား အသက်နှင့်ရင်းကာ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရန် ဆုံးဖြတ်ကြရသည်။ ထိုသို့ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာတွင်းရှိ သွပ်လက် ဖျတ်လတ်သည့် လူစွမ်းကောင်းများကို ရွေးကြရသည်။ ခြင်္သေ့ကြီးမှာ ရွာနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ တောနက်ကြီး၌ ကျက်စားနေသည်ဖြစ်ရာ ထိုနေရာသို့ ရွာသားများမှ သွားရောက် နောင့်ယှက်ပြီး လူထုကြီး ရှိရာအရောက် မျှားခေါ်လာရန် ဖြစ်သည်။ လုူထုကြီးအနားလူထုကြီးအနား ရောက်လာလျင် ထိုလူထုကြီးမှ ထိုခြင်္သေ့ကြီးအား ရင်ဆိုင် သုတ်သင်ရန် ဖြစ်သည်။ အလွန် လျင်မြန်လှသည့် ခြင်္သေ့ကြီးအား ထိုသို့ မျှားခေါ်လာရန်မှာ အလွန်တရာ ကြီးမားသည့် ပေးဆပ်မှု၊ စွန့်စားမှုဖြစ်ရာ သာမာန်လူများအနေနှင့် မလွယ်ကူလှပေ။
ကျေးရွာ လူထုအနေဖြင့် ရွာတွင်းရှိ သွပ်လက် ဖျတ်လပ်သည့်သူ ငါးယောက် ရွေးချယ်ကာ ထိုခြင်္သေ့ အန္တရာယ်ကို ဖြေရှင်းရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ ရွာ၏ အောက်ခြေနားရှိ သွီစားရှိ (Tuica Shih) အနီး ကျောက်တုံးကြီးအနီးတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ အားကောင်း မောင်းသန်မှအစမောင်းသန် ယောင်္ကျား၊ယောက်ျားမှအစ၊ မိန်းမ၊ ကလေးငယ်များ အဆုံး လူထုတရပ်လုံးမှ သွားရောက်၍ စောင့်နေကြရသည်။ ထိုအခါ လက်ရွေးစင် ရွေးချယ်ထားသည့် သူရဲကောင်း ငါးယောက်တို့မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် မိမိနေရာ အသီးသီး၌ စောင့်နေကြသည်။ ခြင်္သေ့ကြီးမှာ အလွန် လျင်မြန်လှသည်ဖြစ်ရကား ထို လက်ရွေးစင် လူငါးယောက်အနေဖြင့် လူစုခွဲ၍ တယောက်နှစ် တယောက် နှစ်ဖာလုံခန့် စီခွာ၍ နေရာယူ ကြရသည်။နေရာယူကြရသည်။ ထိုမှ ခြင်္သေ့ကြီးရှိရာ အနီးရှိ အသံပြုကာ မျှားခေါ်လာ ကြရသည်။ ခြင်္သေ့ကြီးမှာ အလွန် လျင်မြန်လှသဖြင့် အသံပြုပြီး မိနစ် အနီးငယ်အတွင်းမှာပင် ခြင်္သေ့ကြီးမှ မီလာကာ ထိုသူအား သတ်ဖြတ် တတ်သည်။ ပထမ၊ ဒုတိယလူများအား သတ်ဖြတ်သည်ကို သိသောအခါ နောက်လူများမှ ပရိယာ်ဆင်ကာပရိယယ်ဆင်ကာ အရင်ကထက် ခပ်ဝေးဝေးမှ နေ၍ အသံပြုတော့သည်။ ထိုသို့ ခပ်ဝေးဝေးမှ အသံပြုသည်ကိုပင် ခြင်္သေ့ကြီး၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ နောက်ဆုံးလူ အလှည့်ရောက်မှသာ ထိုခြင်္သေ့ကြီးအား လူထုကြီး စောင့်နေရာသို့ ခေါ်ဆောင်လာနိုင်တော့သည်။
= [[ဟာတူးကျေးရွာ]]အတွင်း ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု =
[[ဟာတုူးကျေးရွာဟာတူးကျေးရွာ]]၏ ဘာသာရေး အခြေအနေကို်အခြေအနေကို ဖေါ်ပြရာတွင် အဓိကအားဖြင့် သုံးပိုင်းခွဲ၍ ဖေါ်ပြသွားပါမည်။ ထိိုုုသို ့ဖေါ်ပြရာတွင်ထိုသို့ဖေါ်ပြရာတွင် ဘာသာတရား ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၌ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးနေရာ ပို၍ ရှင်းလင်းစွာvမြင်နိုင်စေရန်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်စေရန် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ [[ဟာတူးရွာ]]၏ ရှေးရိုးရာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု၌ အရှုပ်အထွေး မရှိလှသော်လည်း [[ခရစ်ယာန်ဘာသာ]]တရား ဝင်ရောက်လာပုံ၌ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်။ [[ခရစ်ယာန်ဘာသာ]]ဝင်ရောက်၍ သက်ဝင် ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုသည် အခြားသော ဒေသများကဲ့သို့ သမားရိုးကျ ဝင်ရောက်လာခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဝင်စားဖွယ် တမူထူးခြားစွာ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
== ရှေးရိုးရာ နတ်ဘာသာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ==
ရှေးကာလများ၌ ဟာလ်တူးရွာနှင့် ဒိုင် - ချင်းမျိုးနွယ်စုတို့သည် ရိုးရာ နတ်ဘာသာကို အထုူးသဖြင့်အထူးသဖြင့် ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထိုယုံကြည်မှုဖြင့် နှစ်ရှည်လများ နေထိုင်လာခဲ့ကြရာ လူထုအတွင်း သာရေးနာရေး ကိစ္စများတွင် နတ်မင်းများအား ပူဇော်ပသခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက် ဖြေရှင်းလေ့ ရှိကြသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာ၌လည်းကောင်း၊ အခြား ကိစ္စများ၌လည်းကောင်း ယဇ်နတ် ကိုးကွယ် ပူဇော်ပသခြင်းများဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြသည်။
တောင်ယာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြရာတွင် ကြက်ဥဗေဒင်များနှင့် အခြား ရိုးရာဗေဒင်များဖြင့် တောင်ယာ၏ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း ကံကြမ္မာများကို နမိတ်ဖတ်လေ့ ရှိကြသည်။ အကယ်၍ မကောင်းနမိတ်များ တွေ့ရှိပါက ကျေးရွာတွင်းရှိ နတ်ဆရာများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများမှ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ် စသည်ဖြင့် ယူဆောင်သွားကြကာ ထိုတောင်ယာ၌ ယဇ်ပူဇော်လေ့ ရှိကြသည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပူဇော် ပြီးမှသာလျင် တောင်ယာများကို ခုတ်ထွန်လေ့ ရှိကြသည်။ တောစောင့်နတ်၊ တောင်စောင့်နတ်များကို တိုင်တည်၍ ထိုတောင်ယာမှ တနှစ်ပတ်လုံး ကောင်းမွန်စွာ အကိုျးြုပနိုင်စေရန်အကျိုးပြုနိုင်စေရန် ပသကြခြင်း ဖြစ်သည်။
တောင်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြရာတွင် တခါတရံ မိမိ၏ ပိုင်နက်မှတ်တိုင်များသည် မြေများ ရွေ့လျားခြင်း၊ သဘာဝဒါဏ်များကြောင့် တခါတရံ နေရာများ ရွေ့တတ်သဖြင့် ပိုင်နက်စည်း ပြဿနာများ ရှိတတ်သည်။ ထိုအခါများတွင် ထိုမြေယာများ ပြန်လည်ြုပပြင်ပြန်လည်ပြုပြင် သတ်မှတ်ကြသောအခါ ကြက်၊ ဝက် စသည်များဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ကြပြီး သင့်မြတ်မှုများ ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပူဇော်ကြရခြင်းမှာ သွေးသွင်းမှသာ ကတိ သစ္စာများ ခိုင်တတ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ တိရစြွာန်များ၏ အသွေးများဖြင့် ဖြေရှင်းရသည့် ကိစ္စများသည် တောင်ယာ လုပ်ငန်းများတွင် သာမကဘဲ အခြားသော လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များတွင်ပါ အသုံးြုပအသုံးပြု ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြသည်။
တခါတရံ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် တစုံတခုသော ပြဿနာများ ရှိခဲ့ပါကလည်း ထိုပြဿနာများ ကို တိရစြွာန်တိရစ္ဆာန် တကောင်ကောင်ကို သတ်ကြပြီး သင့်မြတ်မှုများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြသည်။ အကယ်၍ တောထဲဲ၌တောထဲ၌ သားကောင်ကြီးများ (ဥပမာ - ဝက်ဝံ၊ ကျား၊ တောဝက် ္ဇစသည်များစသည်များ) ရရှိမိပါကလည်း အိမ်မွေး တိရစြွာန်တိရစ္ဆာန် များထဲမှ တစ်ကောင်ကောင်ကိုသတ်၍ ၄င်း၏ အသွေးများဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ဂုဏ်ပြုကြပြီးမှသာ စားသုံးကြရသည်။
လင်မယား လက်ထပ် ထိမ်းမြားကြရာတွင်လည်း သေတပန်သက်တဆုံး ပေါင်းသင်းစေရန် လည်း တိရစြွာန်များ၏တိရစ္ဆာန် များ၏ အသွေးများဖြင့်သာ ဂတိ ဂဝတ်ပြုကြရသည်။ ထိုသို့ အသွေးဖြင့် သက်သေတည်၍ ထိမ်းမြားကြရ သည်ဖြစ်ရာ တောင်ပေါ် ဓလေ့ရိုးရာများတွင် လင်မယား ကွာရှင်းခြင်း၊ အိမ်ထောင် ကွဲခြင်းများ တစုံတရာ တွေ့ရခဲလှသည်။ တစုံတရာ ပြုလုပ်သောအခါများတွင် နတ်မင်းများ၏ အလိုမကျဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ရသဖြင့် မတရားမှုများနှင့် ဒုစရိုက်မှုများ နည်းပါးပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုရှိသည်။
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးမှ မိမိ၏ လင်ယောင်္ကျားအားလင်ယောက်ျားအား မထီလေးစားပြုခြင်း၊ မိဘစကား နားမထောင် ခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား မလေးမစားပြုခြင်း၊ သူတစ်ပါး စိတ်မချမ်းသာအောင် ပြုလုပ်ခြင့်း၊ သူတစ်ပါး ပစ္စည်းများ ခိုးယူခြင်း စသည်များသည် နတ်မင်းများ မနှစ်သက်သည့် အပြုအမူများပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခိုးမှု၊ သူတပါးအား မကောင်းကြံစည်မှု စသည့် ဒုစရိုက်မှုများ မရှိသလောက် နဲပါးခဲ့သည်။ နောင်တွင် ခရစ်ယာန် သာသနာ ထွန်းကားလာသောအခါများတွင် နတ်ကိုးကွယ်မှု၌ ယုုံကြည်အားကြီးသောသူယုံကြည်အားကြီးသောသူ အချို့တို့မှာ ထိုနတ်ဘာသာကိုသာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ကိုးကွယ်လိုသုူများလည်းကိုးကွယ်လိုသူများလည်း ရှိခဲ့ကြသည်။
== ခရစ်ယာန်သာသနာ စတင်ရောက်ရှိလားခြင်း ==
ရှေးခေတ် ချင်းလုူမျိုးတို့သည်ချင်းလူမျိုးတို့သည် ရိုးရာနတ်ဘာသာကို်ရိုးရာနတ်ဘာသာကို အထူးသဖြင့် ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ၂ဝရာစု၂ဝ ရာစု အစောပိုင်း ကာလများ (၁၉ရာစ၁၉ ရာစု ုနှောင်းပိုင်းကာလများမှနှောင်းပိုင်းကာလများမှ စတင်သည်။) တွင် ချင်းတောင်ဒေသများသို့ ခရစ်ယာန် သာသနာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ဆင် (ုKharsonKharson) ၏ သာသနာပြုခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်သာသနာ ရောက်ရှိလာပြီး ချင်းပြည်နယ် မြောက်ဖျားပိုင်းဖြစ်သည့် တီးတိန် - တွန်းဇံဒေသများမှ စ၍ ဖလမ်း - ဟားခါး - ထန်တလန် များသို့ သာသနာ ပြန့်နှံ့လာခဲ့သည်။ နောင်တွင် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းများ ဖြစ်သည့် မတူပီ-မင်းတပ် - ပလက်ဝနှင့် ကန်ပလက် ဒေသများသို့ ခရစ်ယာန် သာသနာများ ပြန့်နှံ့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
၂ဝရာစု၂ဝ ရာစု အစောပိုင်းကာလများတွင် ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသများ၌ ခရစ်ယာန် သာသနာတော် ပြန့်နှံ့ ရောက်ရှိလာပြီး ဖြစ်သော်လည်း တောင်ပိုင်းဒေသများ ဖြစ်သည့် မတူပီနှင့် ဝင်းကျင်ဒေသများ၌မူ ရိုးရာ နတ်ဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ ဇိုမီးနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ခုျပ်မှအဖွဲ့ချုပ်မှ သာသနာ မရောက်ရှိသေးသည့် တောင်ပို်င်းဒေသများကိုတောင်ပိုင်းဒေသများကို သာသနာ့ အမှောင်နယ်မြေများအဖြင့် သတ်မှတ်ကြပြီး ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတော် မင်္ဂလာ သတင်းကောင်းတော်မြတ် ဝေငှရန် သာသနာပြုများကို်သာသနာပြုများကို စေလွှတ်၍ သာသနာပြု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထန်တလန်မြို့နယ်မှ ဆရာတော်ထပ်ဒွန်း (Rev. That Dun) အား ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် မတူပီ မြို့နယ်များသို့ သာသနာြုပရန်သာသနာပြုရန် စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် မတူပီမှာ မြို့နယ်အဖြင့် မသတ်မှတ်ခဲ့သေးပေ။ နောင် ၁၉၄၉ မတ်လ (၂၂) ၌သာ နိုင်ငံတော်မှ မြို့နယ်အဆင့်အဖြင့် သတ်မှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ချန်းပြန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက် နေထို်င်ခဲ့သော အဘ ဦးယုံကုမ်း (Pa Zungkuem) နှင့် အမိ ဒေါ်အွေမဲလ် (Nu Awimel) တို့၏သား ဦးထွန်သီုပ် (Pa ThunTuep) သည် ချန်းပြန်းရွာ၌ နေထိုင်စဉ်၌ ခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းတော်မြတ်ကို်သတင်းကောင်းတော်မြတ်ကို ကြားနာခဲ့သည်။ ထိုမှ ၁၉၅၇ ခု တွင် အသက်တာပြောင်းလဲပြီး ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာသည်။ နောင် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော် ဦး ခွါဘုန်း (Pa Khua Bung) ၏ ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြင့် ရေနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာတော်ကို ခံယူခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဦးထွန်သီုပ်သည် ဟာလ်တူးကျေးရွာတွင် ပထမဦးဆုံးသော ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဦးထွန်သီုပ ်(Pa Thun Tuep) သည် ဟာလ်တူးကျေးရွာ ဘွေနား မျိုးနွယ်စုမှ ဖြစ်ပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်ဘဝများဖြစ်သည့် ၁၉၆ဝ ခုနှစ်ထိ တဆယ့်နှစ်နှစ် တိုင်အောင် ချန်းပြန်းရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး မိမိ၏ ဇာတိချက်ကြွေရာ ဟာလ်တူးရွာသို့ ပြန်လည်ရောက်လာသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းတော်မြတ်ကို ဟောကြား သက်သေခံခဲ့သည်။ ရိုးရာနတ် ဘာသာ၌သာ ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးကြသည်ဖြစ်ရာ လက်ခံသူမရှိဘဲ အမျိုးမိုျးအမျိုးမျိုး လှောင်ပြောင် သရော်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ စာတတ် ပေတတ် မဟုတ်ခဲ့သဖြင့် ဝတ်ြုပကိုးကွယ်ရာတွင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာတွင် ဥပုတ်နေ့ကို တခါတလေ မေ့လျော့သည်များလည်း ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါများ၌ ချန်းပြန်းရှိ ဆရာတော် ကာဒွေးထံ သွားရောက် မေးမြန်းကာ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ဒုက္ခ ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော်လည်း ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်မြတ်ကို အမှီပြု၍ ယုံကြည်မှု အားကြီးစွာ ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရပ်တည်၍ ဒေသနာတော်မြတ်အား ဝေမျှဟောကြားခဲ့သည့် ဦးထွန်သီုပ်သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ၁၉၆၁ နှောင်းပိုင်းများတွင် ဝိညာဉ်တော် အသီးအပွင့်များ စတင် ခံစားလာခဲ့သည်။ ဦးရှယ်ကီး (Pa She Kuei)၊ ဦးဟုန်းထန်း (Pa Hrung Thang)၊ ဦး ပွီကိုက် (Pa PueiKai) တို့သည် ပထမဦး ဆုံးသော ဝိညာဉ် အသီးအပွင့်များပင် ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းရင်း ၁၉၆၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးပွဲအား ကျွဲပေါက်ကြီး တစ်ကောင် သတ်၍ ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်က ရန်သူများသဖွယ် မသင့်မမြတ် ဆက်ဆံခဲံကြသည့်ဆက်ဆံခဲ့ကြသည့် ပီလ်တွန်း (Piltun) မျိုးနွယ်စုနှင့် အွေသမ်း (Awitam) မျိုးနွယ်စုတို့အား ထမင်းလက်စုံ စားသောက်စေကြပြီး ဒေသနာတော်မြတ်ကို ကြားနာစေခဲ့သည်။ ဦးထွန်သီုပ် ဦးဆောင်သည့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးပွဲမှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ထိုမျိုးနွယ်စု နှစ်စု၏ သင့်မြတ်ခြင်း အကိုျးကိုအကျိုးကို ခံစားကြရသည်။ ထိုနှစ်သစ်ကူးပွဲ မှစ၍ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူငယ်များသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာကြပြီး ကျေးရွာလူထုအနေ ဖြင့် တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းတော်မြတ်ကို လက်ခံ ယုံကြည်လာကြသည်။
== ခရစ်ယာန်သာသနာ တိုးတက်ထွန်းကားလာခြင်း ==
ဟာလ်တူးရွာ၏ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်မှုသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်သုူယုံကြည်သူ အင်အားများလဲ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ယခင် ကာလများတွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြရာ၌ ဦးထွန်သီုပ်၏ နေအိမ်၌သာ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခဲ့ကြရာမှ ခရစ်ယာန် အင်အားများပြား တိုးတက်လာသောအခါ နေအိမ်၌ နေရာလုံလောက်မှု မရှိတော့ပေ။ ထိုအခါ အသင်းသားများ၏ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပန်းမှုကြောင့် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ဝါးထရံ - သက်ကယ်မိုးဖြင့် ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး အနုမောဒနာ ပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုဗိမာန်တော်၌ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်လာကြသဖြင့် ဘုရားကျောင်းကိစ္စ အဆင်ပြေခဲ့သည်။
ထိုသို့ဖြင့် ခရစ်ယာန်အင်အား တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ စာတန်၏ စုံစမ်း နောင့်ယှက်မှုကိုလည်း များစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ကြရသည်။ မိရိုးဖလာ ရိုးရာ နတ်ဘာသာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်သုူများမှ ဘာသာရေး ဖျက်ဆီးသူများအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေး စော်ကား မော်ကားပြုသုူများ ဟူ၍လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးစွပ်စွဲမှုြုပကာ ဦးထွန်သီုပ်မှ လျှော်ကြေးပေးရန် ဝက်ကို သတ်ကြပြီး ယဇ်နတ်ပူဇော်ကြသည်။ ဝက်ဖိုးလျော်ရန် တိုက်နယ် ဥက္ကဌ ဥိီးသာရွှင်းဦးသာရွှင်း (Pa Taishuen) ထံ တရားစွဲဆိုမှု ပြုကြသည်။ ဥက္ကဌကြီးမှ ဦးထွန်သီုပ်အား အနိုင်ပေးခဲ့သော်လည်း လူများစုနှင့် လူနဲစ ုဖြစ်နေသောကြောင့်လူနဲစုဖြစ်နေသောကြောင့် အရှုံးပေးလိုက်ရပြီး ဝက်ဖိုးကျပ်ငွေ သုံးဆယ်ကျပ် (၃ဝ/-) ပေးလျော်လိုက်ရသည်။
ခရစ်ယာန် အသင်းသားများ ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းရာတွင် အဆင်မပြေ အားနဲနေသဖြင့် ဦးထွန်သီုပ်သည် သံစဉ်နုတ် (Tonic - Solfa) သင်ကြားရန် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရေဖိုင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၄င်းခရီးပြု နေစဉ်တွင် အသင်းတော်အား ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုရန် ဦးစန်ပွေး (Pa Cangpoei) အား တာဝဝန်များတာဝန်များ လွှဲထားခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် သင်တန်းမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသောအခါ အသင်းတော် တာဝန်များကို ပြန်လည် ထမ်းဆောင်ပြီး ၁၉၇၂ တိုင်အောင် အသင်းထောက် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သင်းထောက် တာဝန်ယူနေ စဉ်ကာလ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ကျမ်းစာရက်တို သင်တန်း (Bible Class) ကို ဦးဆောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဦးထွန်သီုပ်သည် အသင်းတော် တိုးတက်ရေးအတွက် မကြာခဏ ခရီးထွက်တတ်လေ့ရှိရာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ကာဒွေးမှ ဦးဟာအောမ် (Pa HaAwm) အား လက်ထောက် သင်းထောက်အဖြင့် တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အသင်းတော် တိုးတက်ရေးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုကာလများတွင် အထက်ဟာလ်တူးနှင့် အောက်ဟာလ်တူးဟုူ၍အောက်ဟာလ်တူးဟု၍ နှစ်ရွာခွဲနေသေးရာ အသင်းတောာ်အသင်းတော် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ခက်ခဲမှုများ ရှိတတ်သဖြင့် ၁၉၆၉ ခုတွင် အထက်ဟာလ်တူးအသင်း ခွဲထွက်လာခဲ့ကြသည်။ အထက်ဟာလ်တူး အသင်းတော်ကို အသင်းထောက် လူကြီးဖြစ်သည့် ဦးဟာအောမ်မှ တာဝန်ယူ ဦးဆောင်မှုြုပခဲ့သည်။ဦးဆောင်မှုပြုခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ZBC သာသနာ၊ မင်းတပ်နယ်၏ (၁၂) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးကြီးကို ဟာလ်တူးကျေးရွာတွင် စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ (ထိုကာလများတွင် ဟာလ်တူးကျေးရွာအား မင်းတပ်မြို့နယ်မှ မတူပီမြို့နယ်သို့ စတင်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် အချိန်ဖြစ်သည်။)
ဆရာတော် ကာဒွေး၏ ပေးဆပ်မှုကြောင့် ခရစ်တော်၏ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းကောင်းကို ကြားခဲ့ကြရသော်လည်း တကြိမ်တခါမျှ ဆရာတော်အား ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းများ မပြုလုပ်ခဲ့ကြချေ။ ခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းတော်မြတ်ကို ယူဆောင်လာသည့် ဆရာတော်အား ဂုဏပြုခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်ကို ၁၉၇၁ ခုုနှစ်တွင်ခုနှစ်တွင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကာလ အထက်နှစ်အောက်ဟူ၍ နှစ်ရွာခွဲ၍ နေထိုင်ခဲ့ကြရာမှ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် နှစ်ရွာပေါင်းကာ ဟာလ်တူးရွာ တစ်ရွာအဖြင့် ပူးပေါင်း နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
တိုက်နယ် ဆရာတော်ဖြစ်သည့် ဆရာတော် ကာဒွေးသည် မိမိ၏ သာသနာနယ်၌ အောင်မြင်မှုများ ရရှိလာပြီဖြစ်ရာ မွေးရပ်သိုမွေးရပ်သို့ ့ပြန်လည်ပြန်လည် ထွက်ခွာချင်လာသည်။ ထိုအခါ ၄င်း၏နေရာ၌ သာသနာ့ တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အထက်တန်း ကျောင်းသားဖြစ်သူ မောင်စံအောင် (Pa Tal Ang) အား ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ဖလမ်းမြို့ ကျမ်းစာကျောင်း (Zomi Baptist Seminary) သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်မှ ဆရာတော် ကာဒွေးသည် မိမိ၏ မွေးရပ်ဖြစ်သည့် လုံငိုးရွာသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာခဲ့သည်။ အသင်းထောက် လူကြီးဖြစ်သည့် ဦးထွန်သီုပ်သည်လည်း ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် တာဝန်မှ ရပ်နားပြီး ၄င်း၏နေရာ၌ ဦးစံပွေးအား တာဝန် လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ ဦးစံပွေးမှ သင်းထောက်တာဝန်ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၄ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ဦးဟာအောမ်မှ သင်းထောက် တာဝန်ကို ဆက်လက် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် မေလ (၈) ရက်နေ့တွင် အသင်းတော် လူငယ် မိဿဟာယ အဖွဲအဖွဲ့ ့(BYF - Baptist Youth Fellowship) ကို စတင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး အသင်းတော် လူငယ်ဥက္ကဌမှာ ဦးထောင်ဘဲလ် (Pa ThawngBel) ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ် မတ်လ (၃) ရက် နေ ့တွင် အသင်းတော် အမျိုးသမီးများအဖွဲအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကို ့ကို ဖွဲ ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဆုံး ဥက္ကဌအဖြင့် ဒေါ်စေအိလ် (Nu Cei Ilh) မှ ဆောင်ရွက်သည်။
ဟာလ်တူးကျေးရွာ အသင်းတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို်ခရစ်ယာန်ဘာသာကို စတင်၍ သက်ဝင်ယုံကြည်သည်မှစ၍ ၁၉၈၁ ခုနှစ် တိုင်အောင် ဝါးကပ်ထရံ၊ သက်ကယ်အမိုးဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည့် ဘုရားကျောင်း၌သာ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကာလများတွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်များ စတင်၍ ခေတ်စားလာပြီဖြစ်ရာ မိမိတို့ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်၊ ဘုရားရှိခိုးရသည့် ဘုရားကျောင်းကို်ဘုရားကျောင်းကို ပျဉ်ထောင်အိမ်အဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဆုံး ဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ကျေးရွာလူထု၏ တက်ညီစွာ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်မှုဖြင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်အဖြင့် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပျဉ်ထောင် အကာ၊ သက်ကယ် အမိုးဖြင့် ဘုရားကျောင်းသစ်ကို်ဘုရားကျောင်းသစ်ကို ဆောက်လုပ်နို်င်ခဲ့ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ ကြပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ် မေလ(၈)ရက်နေ့တွင် ဘုရားကျောင်းကို အနုမောဒနာ ြုပလုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။အနုမောဒနာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဘုရားကျောင်း အနုမောဒနာြုပပွဲ၌အနုမောဒနာပြုပွဲ၌ (MBA. EC) များနှင့် အိိိုင်ဒါခ်အိုင်ဒါခ် (AidakုAidak) ဧရိယာ အသင်းတော်များကို်အသင်းတော်များကို ဖိတ်ကြားပြီး စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အသင်းတော် ကော်မတီသစ်ကို ဖွဲ ့စည်းကာဖွဲ့စည်းကာ ထိုကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူကြ သည်။ အသင်းတော် လူငယ်များအဖွဲ ့နှင့်လူငယ်များအဖွဲ့နှင့် အသင်းတော် အမျိုးသမိီးများအဖွဲ ့မှအမျိုးသမီးများအဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းရံပုံငွေ ရှာကြကာ အသင်းတော်၌ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် အသံချဲ့စက် တစ်လုံး (၁၃၆ဝ ကျပ်ဖြင့်) ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို ့ပြင် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ကက်စက်တစ်လုံး (၁၆၅ဝ ကျပ်ဖြင့်) ကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အသင်းတော်၌ လူငယ်များအသင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအသင်းသည် ရံပုံငွေများ ရှာဖွေရာတွင် အဓိက ပါဝင်ကြရသည်ဖြစ်ရာ ထိုနှစ်ဖွဲထိုနှစ်ဖွဲ့အား ့အား အဖွဲ ့ခွဲ၍အဖွဲ့ခွဲ၍ အမည်များ ပေးထားကြသည်။ အမျိုးသမီးများအသင်းကို Merry, Marta, Lidia, Dorcus နှင့် Devorah ဟူ၍လည်းကောင်း၊ လူငယ်များအသင်းကို Pawl, Peter, James နှင့် John ဟူ၍ လည်း ကောင်း အဖွဲ ့များကို ဖွဲ ့စည်းခဲ့ကြသည်။အဖွဲ့များကို ထိုသို့်အဖွဲဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ့များထိုသို့်အဖွဲ့များ ခွဲခြင်းဖြင့် ရံပုံငွေများ ရှာဖွေရာတွင် များစွာထိရောက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
ဟာလ်တူးကျေးရွာ အသင်းတော်သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေရက်နေ့တွင် ့တွင် ပဥ္စမကြိမ်မြောက်ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေးကြီးကို်အစည်းအဝေးကြီးကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁၄)ရက်နေ ့တို်င်ရက်နေ့ တိုင် MBA ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့် ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လ (၁၅) ရက်မှစ၍ MABC ၏ ဦးဆောင်မှုကို်ဦးဆောင်မှုကို ခံယူခဲ့သည်။ ထိုမှ ဧရိယာ လူငယ ်တွေ့ဆုံပွဲကို်လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကို ၁၉၈၇ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ မေလ ၄ ရက်နေ့အထိ “ကားတို်င်ကို“ကားတိုင်ကို ထမ်း၍ ငါ့နောက် သို့ လိုက်လော့” ဟုူသောဟူသော ကျမ်းချက်ဖြင့် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြသည်။
မိမိ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများတွင် သာသနာ့ အလင်းတရားများ ရရှိသည့် အထိ်မ်းအမှတ်ဖြင့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် လက်ဝါးကားတိုင်များ စိုက်ထူရန် MABC မှ ညွှန်ကြားခဲ့ သည်။ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အသင်းသူ အသင်းသားများနှင့် ကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းကာ ၁၉၉၁ မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ရွာ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ သာ့ တောင်ကုန်း (Tah Tlang) တွင် လက်ဝါးကားတို်င်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ MABC ၏ သုံးနှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပလေ့ရှိသည့် အစည်းအဝးကြီးအစည်းအဝေးကြီး (Trinal) ကို်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ - ၁၃ ရက်နေ့များတွင် “ရေနက်ရာသို့ ရွှေရွှေ့ ့ဦးလော့”ဦးလော့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သက္ကရာဇ်၂ဝဝ၃သက္ကရာဇ် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် ဟာလ်တူးရွာ အပါအဝင် အိုင်ဒါခ် ဧရိယာ၏ သာသနာ့နှစ် ၅ဝ ပြည့် ရွှေရတုယူဘိလ (Golden Jubilee) ပွဲတော်ကို စည်ကားစွာ ကျင်းပနိုင် ခဲ့ကြသည်။
= ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများ =
== လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် အခြား ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ==
ရှေးဦးပိုင်း ကာလများ၌ [[ဟာတူးရွာ]]နှင့် မိမိဝန်းကျင်ရွာများသည် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ် ခရီးပြုကြရာတွင် လမ်းဟူ၍ သတ်သတ် မှတ်မှတ်မရှိဘဲ အဆင်ပြေသလိုသာ သွားလာ ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ သွားလာခဲ့ကြရင်း နောင်တွင် လူသွားလမ်းများ ပေါ်လာကာ ခရိီးြုပသွားလာခဲ့ကြသည်။ခရီးပြုသွားလာခဲ့ကြသည်။ အဆင်ပြေသလို သွားလာခဲ့ကြသည့် အခါများတွင် [[မိုးတွင်းကာလများ]]နှင့် [[ရသီဥတုရာသီဥတု]] ဆိုးရွားသည့် [[အချိန်များ]]တွင် [[ခရိီးသွားလာခြင်းခရီးသွားလာခြင်း]]များ ခက်ခဲတတ်သည်ဖြစ်ရာ [[ရပ်ရွာလူကြီးများ]]နှင့် ကျေးရွာလူထုများမှ ထိုခရီးသွားလာမှု လွယ်ကုူလာစေရန်လွယ်ကူလာစေရန် လမ်းများ ဖေါက်လုပ်ရန်အတွက် စီစဉ်မှုများကို ြုပလုပ်ခဲ့ကြသည်။စီစဉ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
[[ဟာတူးကျေးရွာ]]သည် [[မတူပီ]] - [[မင်းတပ်]] ဆက်သွယ်ရာတွင် အချက်အခြာကျသည့် ကျေးရွာ တစ်ရွာပင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မိုးတွင်းကာလများ၌ [[မတူပီမြို့]]နှင့် [[မင်းတပ်မြို့]]များ ဆက်သွယ်ရသည့် ကားလမ်းမကြီး မြေပြိုခြင်း၊ လမ်းပျက်၍ မော်တော်ကားများ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းပိတ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ တွေ့ ကြုံရတတ်သည်။ ထိုအခါများတွင် [[ပြည်မ]]ဘက်သို့ ခရိီးပြုသည့်ခရီးပြုသည့် ခရီးသွား - ကုန်သည်များ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ၊ အရပ်ပြည်သူ အများစုတို့်သည် [[ဟာတူးကျေးရွာ]]ဘက်မှ ခြေလျင် ခရီးများဖြင့် ခရီးပြုလေ့ ရှိကြသည်။ ထိုသို့ မြို့ နှစ်မြို့နယ် ဆက်သွာယ်ရေးတွင် အချက်ခြာကျသည့် ဤရာတွင် ခရီးသည်များ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ လိုရာခရီး ပြုနိုင်ရန်လိုရာခရီးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လမ်းဖေါက်လုပ်ရေးကို ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်၌ ကျေးရွာကောင်စီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ [[ဦးချစ်ဒါမ်း]] (Pa Kheu Dam) လက်ထက်တွင်မူ လမ်းဖောက်လုပ်ရေးအတွက် စတင် အကောင်ထည် ဖေါ်နိုင်ခဲ့သည်။ [[ဦးချစ်ဒါမ်း]] လက်ထက်တွင် [[ဟာတူး]] - [[ချန်းပြန်း]] နှစ်ရွာကြား လူသွားလမ်း (သုံးပေလမ်း) ကို အောင်မြင်စွာ ဖေါက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အရင်ကာလများ ပညာရေးအတွက် [[ချန်းပြန်းကျေးရွာ]]ရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းတွင် အခြေခံပညာကို သွားရောက် သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ခက်ခဲစွာ ပညာသင်ယူခဲ့ကြရသဖြင့် လူတိုင်း ကျောင်းပညာကို်ကျောင်းပညာကို သင်ယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။ [[ဦးချစ်ဒါမ်း]] လက်ထက်တွင် ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီး [[ဟာတူးကျေးရွာ]] အခြေခံပညာ [[မူလတန်းကျောင်း]]ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤမြော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့်ဤအမြော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့် ပညာသင်ယူကြသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင် [[ကျန်းမာရေး]]အတွက် [[အားကစားကွင်း]] ([[ဘောလုံးကွင်း]]) ကိုလည်း တူးဖေါ်ကာ အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ([[မဆလ]]) ခေတ် ကုန်ဆုံး၍ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲအဖွဲ့ ့([[နဝတ]]) ခေတ် ရောက်သောအခါတွင် ကျေးရွာ (ရဝတ) ဥက္ကဌအဖြင့်ဥက္ကဌအဖြစ် [[ဦးထန်စား]] (Pa ThangCa) မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ [[ဦးထန်စား]] လက်ထက်၌လည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထူးပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ [[ဦးချစ်ဒါမ်း]] လက်ထက်၌ ဖေါက်လုပ်ခဲ့သည့် [[ချန်းပြန်း]] - [[ဟာတူး]] လူသွားလမ်း အစား [[မော်တော်ကားလမ်း]] အဖြင့် ဖေါက်လုပ်ရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင်း စည်ပင်ရေးအတွက် ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို် ဖေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် [[ဦးချစ်ဒါမ်း]]လက်ထက်၌ [[ချန်းပြန်း]] - [[ဟာတူး]] လူသွားလမ်းကို ဖေါက်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ တစ်ဘက်၌ ကျန်ရှိနေသေးသည့် [[ဟာတူး]] - [[ကူျတ်ရွာသစ်]] လူသွားလမ်း (သုံးပေလမ်း) ကို ဖေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအားကို အသုံးြုပလျက်အသုံးပြုလျက် [[ရေအားဆန်စက်]]၊ အသေးစား [[ရေအားလျပ်စစ်များ]]ကိုပါ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ သည်။ ကျေးရွာဒေသ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို အကိုျးရှိရှိအကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်အောင် စတင်လမ်းပြခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ပင် ကျေးရွာအတွင်း အလှည့်ကျ တာဝန်ယူခဲ့ကြသည့် ဥက္ကဌ ခေါင်းဆောင်သူများမှ မိမိ၏ကျရာ ကဏ္ဍများ၌ မလွဲမရှောင်ဘဲ ရပ်ရွာ တိုးတက်မှုအတွက် ဦးလည်မသုန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့၌ တာဝန်ယူ ခဲ့ကြသူများ၏ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုများကို်ပြီးစီးမှုများကို ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် [[ကြိုးတံတားများ]] ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အခြေခံပညာ [[မူလတန်းကျောင်း]] အဆောက်အဦးကို်အဆောက်အဦးကို အုတ်တိုက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ [[ရေအားလျပ်စစ်]]ကို ပိုမို အားကောင်းအောင် မွမ်းမံခြင်း၊ [[ဘုရားကျောင်း]] (ဝတ်ပြုကျောင်း) ကို အုတ်တိုက်များဖြင့် တည် ဆောက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ([[နယက]]) ခေတ်၌ ကျေးရွာ အုပ်ခုျပ်ရေးကိုအုပ်ချုပ်ရေးကို တာဝန်ယူသည့် [[ဦးလောင်းဟော်န်]] (Pa Lawng Hawn) လက်ထက်တွင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေ (စာရေးသူ စာရေးစဉ် ကာလအထိ ဆိုလိုသည်။) ဖြစ်သည့် [[ဟာတူး]] - [[ချန်းပြန်း]] [[မော်တော်ကားလမ်း]]ကို အောင်မြင်စွာ ဖေါက်လုပ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် [[ဟာတူးကျေးရွာ]]သည် အုပ်ခုျပ်သူ၊အုပ်ချုပ်သူ၊ လူထုတို့၏ ဝိုင်းဝန်း အင်အားများကို သက်သေ တည်ပြနိုင်သည့် [[မတူပီမြို့နယ်]]အတွင်းရှိ [[စံပြကျေးရွာ]]ပင် ဖြစ်သည်။
== ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ==
အထက်နှင့် အောက်ဟာလ်တူး နှစ်ရွာ ပေါင်းပြီးသော ၁၉၇၄ နှောင်းပိုင်း ကာလများတွင် ရပ်ရွာဥက္ကဌ၏ ဆောင်ရွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့် အခြခံ ပညာသင်ကျောင်း ထားရှိခွင့်ရလာသည်။ ကျေးရွာ ဥက္ကဌအဖြင့်ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးချစ်ဒါမ်း (Pa Kheu Dam) မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပညာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခွင့် ရရှိလာသောအခါ ရပ်ရွာလူထု၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ဟာလ်တူးကျေးရွာ အခြေခံ ပညာသင်ကျောင်း အဆောက်အဦးကို ဆောက်လုပ်နိုင် ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များမှာလည်း ကျောင်းပညာများ ပိုမို တိုးတက်စွာ သင်ကြားလာခဲ့ကြသည်။
ခေတ်ပညာတတ်များ ရှိလာသည်နှင့်အမျှ ယခင် မိရိုးဖလာ တောင်ယာလုပ်ငန်းသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရာမှ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ၊ လခစား လုပ်ငန်းများကို တဖြည်းဖြည်း လုပ်ကိုင်လာကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ ပထမဦးဆုံး အစိုးရ ဝန်ထမ်းမှာ ဦးပီလ်သွန်းနှင့် ဒေါ်စေဆောဒ်တို့၏သား ဦးထန်းလွေ (Pa Thang Loei) ပင်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံး အထက်တန်း ပညာသင်ယူသူမှာ ဦးအန်ထယ်၏သား ဆရာတော် စံအောင် (Rev. San Aung - Pa Tal Ang) ဖြစ်ပြီး၊ ပထမဦးဆုံး ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းဆင်းမှာ ဦးဘွေထန်း (Pa BawiThang) ဖြစ်သည်။ ဦးဘွေထန်းသည် ဟာလ်တူး ရွာသားများတွင် ပထမဆုံး ကျောင်းဆရာဖြစ်ပြီး မူလတန်း ကျောင်းအုပ်၊ အလယ်တန်းကျောင်းအုုပ်အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် စသည်ဖြင့် နိုင်ငံတော်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးသော စစ်ဘက်အရာရှိမှာ ဦးလုံမိုင်း (Pa TuemThang) ဖြစ်သည်။
ဟာလ်တူးကျေးရွာ၏ ပညာရေးတွင် ဘာသာရေးပညာ၊ တက္ကသိုလ်ပညာ စသည်ဖြင့် အမျိုးမိုျးအမျိုးမျိုး လေ့လာ သင်ယူခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရေးများတွင် ပထမဆုံးဘွဲ့ရမှာ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် စံအောင်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး BD ဘွဲ ့ရသူများမှာဘွဲ့ရသူများမှာ ဦးထွန်းကျော် (Pa ThunThang) ၏သား ဆရာဦးလျန်ဘွေးနှင့် ဦးဟာအောမ် (Ha Awm)၏သား ဆရာဦးလျန်ကုန်း တို့ပင် ဖြစ်ကြသည်။ ပထမ ဦးဆုံး ပညာရေးဘွဲ ့ရ Bပညာရေးဘွဲ့B. Ed မှာရ သူမှာ ဦးခိုင်ထွန်း (Pa KhangThung) ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှာ ဦးထန်းလွေနှင့် ဒေါ်ငိုင်လီုမ်း တို့၏သမီး ဆရာမ ဒေါ်ခင်ကြည် ပင်ဖြစ်သည်။ ဟာလ်တူး ကျေးရွာအတွင်းမှ ပထမဦးဆုံး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားမှာ ဦးထန်းလွေနှင့် ဒေါ်ငိုင်လီုမ်း (Pa Thang Loei-Nu Ngai Luem) တို့၏သား ဆလိုင်းရဲကျော်နိုင် ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးသော မဟာတန်းနှင့မဟာတန်းနှင့် ်MAMA ဘွဲ ့ရသူများမှာဘွဲ့ရသူများမှာ ဦးထန်းလွေနှင့် ဒေါ်ငိုင်လီုမ်းတို့၏ သားများဖြစ်ကြသည့် ဆလိုင်းရဲကျော်ဦးနှင့် ဆလိုင်းရဲကျော်နိုင် (၂ဝဝ၆) တို ့ဖြစ်ကြသည်။တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းများအပြင် ယခုအခါ တက္ကသိုလ် ပညာသင်ယူသူများ၊ အဝေးရောက် စနစ်ဖြင့် တက္ကသို်လ်ပညာတက္ကသိုလ်ပညာ သင်ယူသူများ စသည်ဖြင့် အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ပညာ ပညာဆည်းပူးဆည်းပူး တက်ရောက်သူများလည်း ပို်မို၍ပိုမို၍ တိုးတက် များပြားလာပြီ ဖြစ်သည်။
== ဟာတူးရွာနှင့် ရေအားဆန်စက် ==
ရှေးကာလများ၌ ဟာလ်တူးရွာသားများသည် တောက်ယာထွက် သီးနှံများဖြစ်သည့် စပါးများ၊ ပြောင်းများကို လက်ထောင်းဆုံများဖြင့် ထောင်းကြပြီး စားသုံးခဲ့ကြသည်။ ဘိုးဘွားများမှ ရေမောင်းဆုံများကို တီထွင်ကြပြီး ဆန်စပါးများကို ထောင်းကြိတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လိုသလောက် ခရီး မတွင်ခြင်း၊ တခါတရံ ရေအားနည်းခြင်းများ ကြုံတတ်ကြရာ ထိုရေမောင်းဆုံမှာ သုံးစွဲသူများ နည်းလာပြီး မိမိတို့၏ လက်ထောင်းဆုံများကို်သာလက်ထောင်းဆုံများကိုသာ ပြန်လည် အသုံးပြု တတ်ကြသည်။အသုံးပြုတတ်ကြသည်။
ထိုသို့သော ဒုက္ခများကို်ဒုက္ခများကို ကျော်လွန်နိုင်ရန် ရွာသူရွာသားများမှ နည်းမျိုးစုံဖြင့် စဉ်းစား၊ အကြံထုတ် ခဲ့ကြသည်။ ဘွေနားမျိုးနွယ်စုမှ ဦးထန်စားသည် ထိုဒုက္ခများကို်ထိုဒုက္ခများကို ဖြေရှင်းနိုုင်ရန်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ရွာနဘေးရှိ ကိီလောင်းချောင်းအား အသုံးပြုကာ ပထမဆုံး ရေအားဆန်စက်ကို တီထွင် အသုံးြုပနိုင်ခဲ့သည်။အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။ သင့်တော်သည့် နေရာတွင် ရေသွယ်မြောင်း ဖေါက်လုပ်ပြီး ရဟတ်ကြီးကို လည်ပတ်စေသည်။ ထိုလည်ပတ်သည့် ရဟတ်ကြီးဖြင့် ဆန်စက်ကို လည်ပတ်စေပြီး စပါးများကို ကြိတ်ခွဲစေသည်။ ထိုသို့ သော အောင်မြင်မှုသည် ဟာလ်တူးရွာသားတို့၏ အကိုျးတရားများစွာအကျိုးတရားများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည်။ ယခင် တပင်တပန်း လက်ထောင်းဆုံများဖြင့် ထောင်းခဲ့သမျှ သက်သာမှုများစွာ ရရှိလာကြသည်။ ဤသည်ပင် နောင်အခါများတွင် ဟာလ်တူးရွာ၏ အောင်မြင်မှုများ ရရှိစေသည့် ခြေလှမ်းစပင် ဖြစ်တော့သည်။
== ရေအားလျှပ်စစ် ==
ဥိီးထန်စားသည်ဦးထန်စားသည် ခေတ်ပညာတတ် မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း ရပ်ရွာ တိုးတက်ရေးအတွက် စဉ်းစားကြံဆတတ်သူ ဖြစ်သည်။ ဟာလ်တူး ရေအားဆန်စက်ကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ရည်မှန်းချက်ကြီးသူပီပီ ထိုရေအားဖြင့် ဟာလ်တူးကျေးရွာအား လျှပ်စစ်မီး လင်းစေရမည် ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့သည်။ ကျယ်ဝန်းလှသည့် ဟာလ်တူးရွာ ဧရိယာ၏ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
သစ်ပင်ကြီးများကို်သစ်ပင်ကြီးများကို ပျဉ်ချပ်များအဖြစ် ထုတ်လုပ်ပြီး မတူပီမြို့နှင့် လိုအပ်သူများထံသို့ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုဝင်ငွေများကို်ထိုဝင်ငွေများကို စုဆောင်းပြီးထိုမှစုဆောင်းပြီး ထိုမှ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို စုဆောင်းသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ လုပ်အားယူကာ တူးမြောင်းများကို်တူးမြောင်းများကို ပြင်ဆင် ဖေါက်လုပ်သည်။ ယခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရေအားဆန်စက်ကို်ရေအားဆန်စက်ကို ပြုပြင် မွမ်းမံသည်။ ထို့နောက် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ ရေရဟတ်နှင့် ယန္တရားများကို် တပ်ဆင်ကြပြီး ရဟတ်၏ လည်ပတ်အားဖြင့် ဒိုင်နမိုကို လည်ပတ်စေကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရေအား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှုတွင် အလွန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ရေမြောင်းမှ သွယ်ယူလာသည့် ရေများဖြင့် ရဟတ်ကြီးအား လည်ပတ်စေသည်။ ထိုရဟတ်ကြီး မှတဆင့် ရဟတ်ဘီးလုံးများကို ပတ်ကြိုးများဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး ထိုဘီးလုံးများ လည်ပတ်အားများစေရန် ပြုလုပ်ရသည်။ ရဟတ်ဘီးလုံးများမှာ ဘီးလုံး အကြီး အသေးခြား၍ တပ်ဆင်ပြီး လည်ပတ်အားကို မြှင့်စေရသည်။ လိုအပ်သည့် လည်ပတ်အား ရလာသောအခါ လျှပ်စစ်အား ထုတ်လွှတ်သည့် ဒိုင်နမို်နှင့် ဆက်သွယ်ပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ထုတ်ယူရသည်။ ရိုးရှင်းလှစွာ ထုတ်လုပ်သည့် ဤလျှပ်စစ်ဓါတ် အားဖြင့်ပင် မတူပီမြို့နယ် တလွားတွင် အောင်မြင်များ ရရှိပြီး စံပြကျေးရွာအဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်ကို ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် မတူပီမြို့နယ် ကျန်းမာရေမှူး ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာရိုအုပ်နှင့် မြို့နယ်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ ့ဥက္ကဌတို့မှတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌတို့မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ပထမဥိီးဆုံးပထမဦးဆုံး ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သဖြင့် အားနည်းမှုများလည်း ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ရာ အခက်ခဲများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအားနည်းချက်များကို တစ်ခုချင်း မြင်လာကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တဖန် ဆန်းသစ်ကြပြီး ဓါတ်အားပိုမို ၍ ထုတ်လုတ်နိုင်သော စက်ရုံကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဓါတ်အားများ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိ်င်ခဲ့ကြရာ လိုအပ်သည့်နေရာများ၌ လိုအပ်သလို သုံးစွဲလာနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရေအား လျှပ်စစ်စက်ရုံသစ်ကို သက္ကရာဇ် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် တွင် မြို့နယ်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဥက္ကဌမှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
== ဟာတူး (Haltu) ရွာ [[ဗိမာန်တော်]] ==
ဟာလ်တူး ကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန် သာသနာတော် ၁၉၅၇-၅၈ ခုနှစ်များတွင် ရောက်ရှိလာသည်။ ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များ တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန် အင်အား များပြားလာသောအခါ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ဘုရားဝတ်ပြုနိုင်ရန် ဝါးထရံ သက်ကယ်မိုးဖြင့် ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အထက် - အောက် နှစ်ရွာခွဲ၍ နေရသဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ စည်းလုံးမှုအင်အား နဲပါးလှသည်ဖြစ်ရာ ဥပုတ်နေ့လောက်၌သာ အတူတကွ ဝတ်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီး အခြားနေ့များတွင်မူ အဆင်ပြေသလိုသာ ဝတ်ြုပခဲ့ကြရသည်။ဝတ်ပြုခဲ့ကြရသည်။
၁၉၇၄-၇၅ ခုနှစ်များတွင် ဟာလ်တူးကျေးရွာသည် မတူပီမြို့နယ်၏ ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုအဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အထက်နှင့် အောက်ဟာလ်တူး နှစ်ရွာကို်နှစ်ရွာကို တစ်ခုတည်းသော ကျေးရွာအဖြင့် ပူးပေါင်း နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဟာလ်တူးကျေးရွာ နှစ်ရွာပူးပေါင်းသည့် အခါများမှစ၍ စည်းလုံးမှုပိုမို အားကောင်းလာခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ယခင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့် ဗိမာန်တော်မှာလည်း ဟောင်းနွမ်းလာ သည်ဖြစ်ရာ ဘုရားကျောင်းသစ ်ဆောက်လုပ်ရန်ဘုရားကျောင်းသစ်ဆောက်လုပ်ရန် စဉ်းစားလာခဲ့ကြသည်။
ကျေးရွာဝန်းကျင်မှ သစ်တောထွက်များကို်သစ်တောထွက်များကို ကောင်းစွာ အသုံးချလာကြင်္ပြီဖြစ်ရာအသုံးချလာကြပြီဖြစ်ရာ သစ်လုံးကြီးများမှ ပျဉ်ချပ်များကို်ပျဉ်ချပ်များကို ထုတ်လုပ်ကြပြီ်းထုတ်လုပ်ကြပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်များပင် ဆောက်လုပ်လာကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဘုရားကျောင်းကို ပျဉ်ထောင်ဖြင့် ဆောက်လုပ်နိိုင်ရန်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် အသင်းတော် လူကြီး - လူငယ်၊ ကျား-မ များနှင့် ကျေးရွာလုူထုကျေးရွာလူထု တစ်ရပ်လုံး ညီညွတ်စွာ အားထုတ်လာကြသည်။ မိမိ တတ်ကျွမ်းသည့် စွမ်းအားများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ အသီးသီးဖြင့် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ ယုံကြည် အားထုတ်မှုကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ပျဉ်ထောင်၊ သက်ကယ်အမိုးဖြင့် ဘုရားဝတ်ပြုရာ ဗိမာန်တော်သစ်ကို ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဘုရားကျောင်းသစ်ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်မေလ (၈)ရပ်နေ့တွင် ရက်နေ့တွင် MBC EC များ Aidak ဧရိယာ အသင်းတော်များနှင့်အတူ ဖွင့်ပွဲ၊ အနုမောဒနာ ပြုနိုင်ခဲ့ ကြသည်။ပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဦးထန်းလွေနှင့် ဒေါ်ငိုင်လီုမ်းတို့၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ဦးသည် မိမိတို့ မိသားစု၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် မောင်နှမများ၏ ပညာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့်အတူ စိီးပွားရှာခဲ့ကြသည်။စီးပွားရှာခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် မိသားစုတွင်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး ခဲ့ကြသည်။ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဒေါ်ခင်ဥိီးဒေါ်ခင်ဦး (ဒေးဗစ် စိုးစံနူး) သည် ကိုသိန်းဌေး (ဒေးဗစ်စိုးစံပါး) နှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်ဦးသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် မိမိတို့ကျေးရွာ ဘုရားကျောင်း၏ တိုးတက်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့သည့် အသင်းတော် လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ရာ ကျေးရွာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အမိုးအတွက် ကိုသိန်းဌေးနှင့် မခင်ဦးတို့် ဇနီးမောင်နှံမှ သွပ်ပြားများကို်သွပ်ပြားများကို လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ထိုုသို့ထိုသို့ လှူဒါန်းသည့် သွပ်ပြားများကို ကျေးရွာအသင်းတော်မှ ရရှိကြသောအခါ ကျေးရွာဘုရားကျောင်းကို အင်္ကတေ အုတ်တိုက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် အားထုတ်လာကြသည်။
ဟာလ်တူး ကျေးရွာရှိ အသင်းတော်သူ အသင်းတော်သားများသည် ဦးသိန်းဌေးနှင့် ဒေါ်ခင်ဦးတို့၏ ပေးဆပ်မှုများနှင့် အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မိမိတ ို့တတ်နိုင်သည့်မိမိတို့တတ်နိုင်သည့် ပေးဆပ် အသုံးတော်ခံမှုများကို သာဓကပြုကြပြီး ဘုရားကျောင်းတော်ကြီး တည်ဆောက်ရေးကို ပိုမို၍ အားထုတ် ပေးဆပ်မှုများ ပြုလုပ်လာကြသည်။ ရံပုံငွေ ရှာဖွေ ခြင်း၊ ပစ္စည်း ကရိယာများ ဝယ်ယူ စုဆောင်းခြင်းစသည့် အစစလိုအပ်မှုများကို စုဆောင်းရှာဖွေ စုဆောင်းလာကြ သည်။စုဆောင်းလာကြသည်။ လူထုလုပ်အားများဖြင့် အုတ်ဖုတ်ခြင်း၊ သဲများ စုဆောင်းခြင်း၊ ပျဉ်အတွက် လွှဆွဲခြင်း၊ ဘိလပ်မြေသယ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း စသည်ဖြင့် အသီးသီး ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ လမ်းပြဆောင်မမှု၊ အသင်းအုပ် သက‹္ခာတော် ဆရာတော် ္မစံအောင်နှင့် အသင်းတော် လူကြီးများ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဟာလ်တူးကျေးရွာ၏ ဘုရားဝတ်ပြုရာ ဘုရားကျောင်း ဗိမာန်တော်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့ကြသည်။ ထိုဘုရားကျောင်း ဗိမာန်တော်ကြီးကို သက္ကရာဇ် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ် ပြီးဆီးခဲ့ကြပြီး အိုင်ဒါခ်ဧရိယာ အသင်းတော်များနှင့်အတူ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းကာ အနုမောဒနာပြု ဖွင့်လှစ်နိုင် ခဲ့ကြသည်။
== ဟာတူး (Haltu) ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ==
ဟာလ်တူး ကျေးရွာ၏ မူလတန်း စာသင်ကျောင်းကို ၁၉၇၄ နောက်ပို်င်းမှနောက်ပိုင်းမှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုမှ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပျဉ်ထောင် သက်ကယ်မိုးဖြင့် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ မဆလ ခေတ်ကာလ တလျှောက်လုံးတွင်ပင် ပညာရေး အခြေအနေမှာ အတန်သင့် တိုးတက်မှုများ ရှိလာခဲ့သည်။
မတူပီမြို့နယ်တွင် စာသင်ကျောင်း နောက်ကျစွာ ရရှိခဲ့သော်လည်း အိမ်နီးချင်းရွာဖြစ်သည့် ချန်းပြန်းရွာ၌ ပညာသင်ယူခဲ့ကြသဖြင့် အခြားသော ကျေးရွာများထက် နောက်ကျမှု မရှိလှပေ။ ထို့အပြင် ကျေးရွာလူထု၏ ကြိုးပမ်းမှုနှင့် တာဝန်ရှိ အုပ်ခုျပ်သူများ၏အုပ်ချုပ်သူများ၏ ရပ်ရွာတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆောက်ရွက်ခြင်းများကြောင့် မတူပီမြို့နယ်တွင် စံပြအဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း အစရှိသော လုပ်ဆောင်မှုများသည် ဟာလ်တူးကျေးရွာ၏ တိုးတက်မှု ပြယုဂ်များပင် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် စာသင်ကျောင်းများရရှိ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည် နှင့်အညီ အခြားသော ပညာရေးဆိုင်ရာ အားပေးမှုများလည်း ခံစား ရရှိခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကြိုးပမ်းမှုများကို အသိမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းကို အသစ ်ဆောက်လုပ်ခွင့်အသစ်ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ ဟာလ်တူးကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းကို အုတ်တိုက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့်အပြင် ရံပုံငွေ များကိုလည်း ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် တိုက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် စာသင်ကျောင်း အသစ်ကို မြို့နယ် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌနှင့်အတူ မြို့နယ်လူကြီးများမှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ သည်။ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းသား - ကျောင်းသူများအတွက် သင်ထောက်ကူစာသင်အထောက်အကူ ပစ္စည်းများနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်များ၊ ကျောင်းဆရာ - ဆရာမများကို်လည်းဆရာမများကိုလည်း အားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။
== ချန်းပြန်း (Hlang Prang) - ဟာတူး (Haltu) မော်တော်ကားလမ်း ==
ဟာလ်တူးကျေးရွာ၏ လမ်ပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် အရင်ကာလများတွင် ခက်ခဲ့မှုများရှိခဲ့ကြောင်း ဖေါ် ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုခက်ခဲသည့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကို်ဆက်သွယ်ရေးကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အုပ်ခုျပ်သူများနှင့် ကျေးရွာလူထုမှ တွေးတော ကြံစည်ခဲ့ကြသည်။
မဆလခေတ် ကျေးရွာပြည်သူ့ကောင်စီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးချစ်ဒါမ်း လက်ထက်တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု ကဏ္ဍကို်ကဏ္ဍကို အထူးပင် အလေးထားခဲ့သည်။ ယခင်ကာလများတွင် လမ်းဟုူ၍လမ်းဟု၍ သတ်သတ် မှတ်မှတ် မရှိခဲ့သည့် ချန်း ပြန်း - ဟာလ်တူးလမ်းကို ဖေါ်ခဲ့ပြီး သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန် သုံးပေလမ်း ဖေါက်လုပ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် ဟာလ်တူး - ကာလ်အီမ်းလမ်းကိုလည်း ဖေါက်နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ လက်ထက်တွင် ဥက္ကဌအဖြင့် ဆောင်ရွက် ဦးစီးခဲ့သည့် ဦးထန်စား လက်ထက်တွင် မိုးတွင်းကာလများတွင် မင်းတပ် - မတူပီ ဖြတ်လမ်းအဖြင့် အဓိကအသုံးပြုသည့် ဟာလ်တူး - ကူျတ်ရွာသစ်လမ်းကို်လည်းကူျတ်ရွာသစ်လမ်းကိုလည်း ဖေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့ သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျေးရွာ တိုးတက်မှုကို်တိုးတက်မှုကို အလေးထားသည့် ကျေးရွာ လူထုအနေဖြင့် ဟာလ်တူးကျေးရွာ အတွင်း မော်တော်ကားလမ်း ဖေါက်လုပ်ရေးကို များစွာလိုလားကြသည်။
ဥိီးထန်စားဦးထန်စား လက်ထက်တွင် ကျေးရွာတွင်း မော်တော်ကားလမ်း ဖေါက်လုပ်ရေးကို အထုူးကြိုးပမ်းခဲ့သည်။အထူး ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ကားလမ်း ဖေါက်လုပ်ရေးကို်ဖေါက်လုပ်ရေးကို ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထအားဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး ဥိီးစွာရွာအတွင်းဦးစွာရွာအတွင်း ရွာလယ်လမ်းမကို စတင်၍ ဖေါက်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအဝင်လမ်း မှစ၍ ရွာအထွက်တိုင် လမ်းမကြီးကို်လမ်းမကြီးကို ဖေါက်လုပ်ခဲ့သည်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ဆက်လက်၍ ဖေါက်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။ နောင်တွင် ကျေးရွာ ဥက္ကဌအဖြင့် တာဝန်ယူကြသည့် ခေါင်းဆောင်များမှ ကျေးရွာတွင်း မော်တော်ကားလမ်း ဖေါက်လုပ်ရေးကို အထုူးအထူး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ လမ်းဖေါက်လုပ်မှုကို ဦးချစ်ဒါမ်း လက်ထက်မှစ၍ ဦးထန်စား၊ ဦးကာလ်ဗန်း၊ ဦးရိုင်ပွန်း၊ ဦးခါပ်နား စသည်ဖြင့် မိမိကျရာ၌ အသီးသီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ကျေးရွာ လမ်းဖေါက်လုပ်ရေးကို်လမ်းဖေါက်လုပ်ရေးကို ဖေါ်ပြပါ ဥက္ကဌအသီးသီးမှ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီး မြို့နယ် အကြီးအကဲများထံ ရံပုံငွေရရှိရေးကို်ရံပုံငွေရရှိရေးကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လမ်းဖေါက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေများ(ဘတ်ဂျက်) ရရှိလာကြပြီး လမ်းဖေါက်လုပ်ခြင်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာ ဥက္ကဌအဖြင့် ဥိီးလောင်းဟောန်မှဦးလောင်းဟောန်မှ ဆောင်ရွက်လာသောအခါ ထိုလမ်းဖေါက်လုပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုမှာများစွာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ လမ်းဖေါက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေများ ရရှိခဲ့သည် သာမကဘဲ လမ်းဖေါက်လုပ်သည့် ယန္တရားများကိုပင် ငှားရမ်းပြီး ဖေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သိုု့ဖြင့်သို့ဖြင့် သက္ကရာဇ် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ချန်းပြန်း - ဟာလ်တူးကားလမ်းကို အောင်မြင်စွာ ဖေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အခက်အခဲ အဟန့်တား အမျိုးမိုျးကြားမှအမျိုးမျိုးကြားမှ မော်တော်ကား လမ်းမကြီးကို ဖေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး မတူပီမြို့နယ် အုပ်ခုျပ်သူအုပ်ချုပ်သူ အကြီးအကဲများမှ အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြသည်။
= ရည်ညွှန်းကိုးကား =
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/155232" မှ ရယူရန်